(No. 34, June 12, 2020)
၁။ သီပေါမြို့နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်နှင့် RCSS/SSA တိုက်ပွဲဖြစ်
၂။ ဂျော်မဆပ်စစ်ရှောင်စခန်းတွင် အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်စိုက်ထူ
၃။ ၅ လ ကျော်အတွင်း ပလက်ဝတွင် တိုက်ပွဲကြောင့် အရပ်သားသေဆုံးမှု ၄၀ ဦးထိရှိ
၄။ KNU နှင့် ကရင်ပါတီများ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်နှင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့
၅။ ခိုလမ် တောင်သူ ၄၇ ဦး ကို တပ်မှ တရားစွဲဆိုထား
၆။ ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ရွေးချယ်မည်
၇။ မွန်ပြည်နယ်တွင် တပ်မဲရုံအပါအဝင် မဲရုံပေါင်း ၉၅၈ ရုံလျာထား
၈။ ပလက်ဝမြို့နယ် နန်းချောင်းဝကျေးရွာသားတစ်ဦး အမည်မသိလက်နက်ကိုင်တစ်စုမှ ပ စ်သတ်ခံရ
၉။ တိုက်ပွဲရပ်တန့်ပြီး စစ်ရှောင်များနေရပ်ပြန်နိုင်ရေးလုပ်ဆောင်ပေးရန် ကချင်အဖွဲ့များတောင်းဆို
၁၀။ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (CNLD) မှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဇူလိုင်လကုန် တွင် အပြီးကြေညာမည်
၁၁။ RCSS/SSA ရရှိလာသည့် ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းကို ခက်ခဲသည့် နေရာပြန်ခွဲမည်
၁၂။ ကိုဗစ်ကြောင့် ၂၁ ရာစုပင်လုံ ညီလာခံကို အကျဉ်းချုံးကျင်းပမည်
၁၃။ ပူတာအို စစ်ရှောင်များကို နေရာအသစ်တွင်ပြန်လည်နေရာချထားရန် KHCC စီစဉ်
၁၄။ စစ်တွေမြို့နယ်တွင် တပ်မတော်ရေယာဉ်မှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၁ ဦး သေဆုံး၊ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
၁၅။ မှတ်ပုံတင်မရှိသေးသည့် ကရင်လူဦးရေ ၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် ၅၀,၀၀၀ ကျော်ရှိနိုင်ကြောင်း ကရင်ရေးရာဝန်ကြီး ပြော
၁၆။ မှတ်ပုံတင် မရှိသည့် ကရင်နီ ဒုက္ခသည်များ မဲပေးရန် ဆန္ဒရှိ
၁၇။ ပြိုကျသည့် ပင်လောင်း ဟော်နန်း ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းမည်
၁၈။ ပုဏ္ဏားကျွန်းတွင် AA က တပ်အရာရှိ ၁ ဦးကို သတ်ပြီး ၁ ဦး ဖမ်းဆီးသွား
၁၉။ မြဝတီရဲစခန်းရှေ့ ပေါက်ကွဲမှုမှာ ဗုံးသီးဟောင်းအား ချိန်ကိုက်မိုင်းပုံစံပြုလုပ်၍ ဖောက်ခွဲခဲ့ဟု ဆို
၂၀။ လားရှိုးဘက်မှလာသည့် အထောက်အထားမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၈ ဦး မြဝတီတွင် ဖမ်းမိ
၂၁။ မင်းပြား၊ သစ်ပုတ်တောင်ရွာအနီး တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံ ခြောက်ထောင်နီးပါး ထွက်ပြေးနေရ
၂၂။ ပိုးတွေ့အမှတ်စဉ် ၂၄၉ နှင့်ထိတွေ့သူ စာစစ်ဆရာနှင့်အဆောင်တူ ဆရာ ၅၉ ဦးကို အသွားအလာကန့်သတ်ထား
၂၃။ တန့်ယန်းမြို့နယ် အတွင်း အဆိပ်ရှိမှိုစားမိ လင်မယား ၂ ဦးသေ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်မတော်နှင့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ( RCSS/SSA) တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
ဇွန်လ ၁၀ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ဝန်းကျင်က သီပေါအခြေစိုက် ခြေမြန်တပ်ရင်း ခမရ ၃၂၆ နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါတိုက်ပွဲမှ အစိုးရတပ်မတော်အရာရှိ ၂ ဦး ကျဆုံးကာ၊ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း စစ်မြေပြင် သတင်းအရ သိရသည်။“ အစိုးရ တပ်ဘက်ကတော့ အရာရှိ ဗိုလ် ၂ ဦး၊ ၂ ပွင့်နဲ့ က သေဆုံးတယ်။ ၂ ဦးကတော့ ဒဏ်ရာရတယ်” ဟု ဒေသတွင်း အမည်မဖော်လိုသည့် အရာရှိတဦးက ပြောပြသည်။ သို့သာ် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကိုမသိရှိရသေးကြောင်း ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး က ပြောသကဲ့သို့ RCSS/SSA ၏ သတင်း ဝက်ပ်ဆိုဒ် ဖြစ်သည့် Tai Freedom တွင်လည်း ဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
အစိုးရတပ်မတော်က သီပေါမြို့နယ် ပန်ခုတ် ပန်ခမ်းရွာဘက်သွားမည်ဟု အကြောင်းကြားသည့်အပေါ် RCSS/SSA က ကားလမ်းအတိုင်းသာ သွားရန်၊ တောလမ်းဘက်မသွားရန် အကြောင်းပြန်ခဲ့ကြောင်း RCSS/SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။“ တောထဲမှာ ကျနော်တို့စစ်ကြောင်းရှိမှာမို့ ထိတွေ့မှုဖြစ်နိုင် တယ်။ အဲတာကို သူတို့က လမ်းအတိုင်းမသွားဘဲ တောထဲကိုသွားတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ တပ်သားတွေနဲ့ ထိတွေ့မှု ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ”ဟု ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး က ဆိုသည်။ တိုက်ပွဲသည် ညနေ ၅ နာရီ မှ ညနေ ၆ နာရီထိ ကြာခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်ကလည်း သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ပုံပါကျင်မြို့နယ်တွင် အစိုးရတပ်မတော်နှင့် RCSS/SSA တို့ တိုက် ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။“ အခုဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေက အထက်ကစီမံချက်ရှိရှိနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်တာ မဟုတ်လောက်ဘူး။ အောက် ခြေက အပေါ်ရဲ့စည်းကမ်းချက်ကို လိုက်နာမှုမရှိတာလားပေါ့။ အထက်ကတောင် သိချင်မှသိမယ်”ဟု ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး က ပြောသည်။ “ ကျနော်တို့ အောက်ခြေမှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ မဖြေရှင်းရင်တော့ ပြဿနာ ကြီးလာနိုင်ပါ တယ်။ ပြဿနာ မကြီးအောင်တော့ ကျနော်တို့ အဖက်ဖက် ညှိနှိုင်းဖို့ပဲရှိပါတယ်” ဟု ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး က ပြောဆို လိုက်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/17055
ကချင်ဒေသတစ်ကျော့ပြန်စစ်ပွဲ ၉ နှစ်ပြည့်နေ့တွင် Kachin Youth Movement အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ ဂျော်မဆပ် စစ်ရှောင်စခန်းတွင် အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင် စိုက်ထူခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ “ANHTE GALOI N MALAP NA GA AI” (ကျွနိုပ်တို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါ) အဓိပ္ပာယ်ရသည့် စာတမ်းပါကျောက်တိုင်ကို စခန်း ၃ ခုတွင် စိုက်ထူသွားရန် ကနဦး စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း နေရာအခက်အခဲကြောင့် စခန်း ၁ ခုတွင်သာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ လူငယ်တွေကို ဘယ်သူမှ တိုက်တွန်းပေးတာမရှိဘူး။ အခုဆိုရင်စစ်ရှောင်လာတဲ့ ကာလကအရမ်းကြာလာ ပြီဖြစ်တယ်။ နောင်တချိန်မှာ မျိုးဆက်သစ်တွေ သိမြင်ဖို့။ အမြဲတမ်းသတိရနေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်တာပေါ့လေ။ ကျောက်တိုင် စိုက်ထူတဲ့နေရာမှာလည်း ၃ နေရာမှာ လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်။”ဟု အစီစဉ်အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့သည့် ကချင်လူငယ် အဖွဲ့မှ ကိုပေါလု က ပြောသည်။ ဂျော်မဆပ်စစ်ရှောင်စခန်းတွင် စိုက်ထူထားသည့် ကျောက်တိုင်အတွက် ဆုတောင်းပွဲ အခမ်း အနားကို ကချင်တစ်ကျော့ပြန် တိုက်ပွဲ ၉ နှစ်ပြည့်သည့် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း ၃ နာရီ အချိန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စစ်ရှောင်များနေထိုင်သည့်စခန်းတွင် အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်စိုက်ထူသည့်လှုပ်ရှားမှုသည် စစ်ရှောင်ပြည်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဂျောမဆပ် စစ်ရှောင် ဒုတာဝန်ခံ ဒေါ်ဘောမ်မျှော်က ယခုလိုပြောဆိုသည်။ “အခု လို စစ်ရှောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုဟာ အင်မတန်မှကောင်းမွန်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်တုန်းက ကျမတို့ လူမျိုးတွေဟာ နေရာတကာ နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာအမှတ်အသားတွေမှ မရှိခဲ့ဘူ။ အဲ့ကြောင့် အခု စစ်ရှောင်တွေ နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကို အခုလို အမှတ်အသား မှတ်တိုင်ပြုလုပ်ထားက အရမ်းကို ထောက်ခံတယ်။ ဒီနေရာ မှာ စစ်ရှောင်တွေက ခက်ခက်ခဲခဲနေထိုင်ခဲ့တာကို တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ လှုပ်ရှား မှုတွေလည်း ဆက်လုပ်ပေးစေချင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ ဂျော်မဆပ်စစ်ရှောင်စခန်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်နွေရာသီတွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ ၂ တပ်ရင်း ၁၄ နယ်မြေကို မြန်မာ့တပ်မတော်က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန် စစ်ရှောင်အဖြစ်ထွက်ပြေးလာသူများဖြစ်သည်။ လယ်ကုန်း ဗက်လင်စစ်ရှောင်နှင့် ဂျန်မိုင်ကောင် (RC) စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် ကျောက်တိုင်စိုက်ထူရန်စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း မြေနေရာအခက်အခဲကြောင့် ယခုနှစ်တွင် စိုက်ထူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကချင်တစ်ကျော့ပြန်တိုက်ပွဲကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းမြောက်ဒေသတွင် ကချင်စစ်ရှောင် ၁သိန်းကျော်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အများစုမှာ နေရပ်ပြန်လိုကြောင်း ပြောဆိုနေကြပါသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/10/%e1%80%82%e1%80%bb%e%80% b1%e1%80%ac%e1
ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်တို့ကြား တိုက်ပွဲများကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဇန်ဝါရီလမှ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ကြား ၅ လ ကျော်အတွင်း အရပ်သား ၄၀ ဦးထိ သေဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်း Chin IDP Support Committee ဖော်ပြ ချက်အရ သိရှိရသည်။
CISC ဖော်ပြချက်အရ ၂၀၂ဝ ခုနှစ် ဇနဝါရီလမှ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ကြား တိုက်ပွဲများကြောင်း အရပ်သား သေဆုံးမှုမှာ ၄၀ ဦး အထိ ရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ အများစုမှာ ပလက်ဝမြို့နယ်ရှိ မိတ်စာရွာ၊ ဝက်မရွာ၊ နန်းချောင်းဝရွာ၊ မြို့မ၊ ရွာမ၊ မင်တာရွာ၊ ပြိုင် တိန်ရွာ၊ ကြက်ဥဝရွာ၊ ပ္ပီဝုန်းရွာနှင့် ဆီးဖလောင်းရွာနေ ဒေသခံနေ ပြည်သူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သေဆုံးသူ အများစု မှာ ဗုံးကြဲရာမှ သေဆုံးသူ၊ လက်နက်ကြီးထိမှန်၍ သေဆုံးသူ အများဆုံးဖြစ်ပြီး အချို့မှာမည်သည့် လက်နက်ထိ မှန်သည် မသိရဘဲ သေဆုံးမှုများပါ ပါရှိနေကြောင်း CISC ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
၂၀၂ဝ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်တို့ကြား တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာမှုကြောင့် ပလက်ဝမြို့ တွင် တိုက်ပွဲရှောင်သည့် အိမ်ထောင်စု ၁၁၃၂ စုရှိပြီး လူဦးရေအားဖြင့် ၅၀၉ဝ ဦး ရှိကြောင်း နှင့် ဆမီးမြို့တွင် အိမ်ထောင်စု ၆၉၈ စုရှိပြီး လူဦးရေအားဖြင့် ၂၉၆၁ ဦး ရှိကြောင်း ပြည်သူများ အရေးပေါ်ကူညီရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီ RRCCI ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73361
၄။ KNU နှင့် ကရင်ပါတီများ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ် နှင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်း မှုပြုလုပ်ခဲ့
KNU- ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဗဟိုခေါင်းဆောင်များနှင့် ကရင်နိုင်ငံပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ ကရင်လူငယ် များပါဝင်၍ ရှေ့ဆက်ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ညှိ နှိုင်းသည့် အွန်လိုင်း (Online Meeting) အစည်းအဝေးတစ်ခု ယမန်နေ့ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လတ်တလော ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေများ၊ စိန်ခေါ်မှုများကို နှီးနှောဖလှယ်ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံရေးပါတီ ၏ အခန်းကဏ္ဍများနှင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားနိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ ကြကြောင်း KNU အတွင်းရေးမှူး (၂) ပဒိုစောလှထွန်းက ပြောသည်။ “ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုအရ ၂၀၂၀ အလွန် တက် လာမယ့် အစိုးရအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့မှ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အာမခံ ချက်ရှိဖို့အတွက် ပြုလုပ်ကျင်းပမဲ့ UPC ( ပြည် ထောင်စုညီလာခံ) အခင်းအကျင်းနဲ့ UPC က ကျင်းပဖို့ လိုအပ်မလိုအပ်၊ UPC ကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲ Camp aign မတိုင်ခင် အစိုးရက ပေးပို့လားတဲ့ ဇူလိုင်လမှာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် ကျင်ပရင် ဘယ်လို အခင်းအကျင်း၊ ကျင်းပမယ်ဆိုလည်း ဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စတွေ အဲ့ဒါတွေကို update လုပ်ကြတာပေါ့”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို လွှတ်တော်တွင်း လွှတ်တော်ပြင်ပ ဟန်ချက်ညီညီ သွားနိုင်ရေး အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မည့် အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီး လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ပြင်ဆင်ထားရမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ကရင်လူငယ်များ၏ ပါဝင်ရမည့် အခန်းကဏ္ဍများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားကြမည်ဟု ၎င်းအစည်းအဝေး၌ သဘောထားများရှိခဲ့ကြောင်း ပဒိုစောလှထွန်းက ဆက် ပြောသည်။
သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားနိုင်ရေး အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သည့် အစိုးရ၊ တပ်မတော်အစုအဖွဲ့များနှင့် အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများမှ Online အစည်းအဝေးများဖြင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အလားတူ အစိုးရမှ ပြည် ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို လာမည့် ဇူလိုင်လအတွင်း ကျင်းပ လိုကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် မေလကုန်တွင် အပစ်ရပ် EAO အဖွဲ့အစည်းများသို့ တရားဝင် အဆိုပြုထားသလို ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုင်း (၃)တွင် ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုမည့် အချက်များ၊ ညီလာခံကျင်းပမည့် အခင်းအကျင်း ပုံစံ များကိုပါ အစိုးရဘက်မှ အဆိုပြုထားသည်။ http://kicnews.org/2020/06/knu%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80 %84%e1%80%b7%e1%80%b9
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်ခရိုင် နမ့်စန်မြို့နယ် ရလခတိုင်းရုံးစိုက်ရာ ခိုလမ်မြို့နယ်ခွဲရှိ အမှတ် ၆၆ ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ တောင်သူ ၄၇ ဦး ကို တရားစွဲဆို ထားကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
အမှတ် ၆၆ ခြေလျင်တပ်ရင်းသည် တောင်သူ ၆၄ ဦး ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် မြေဧက (၁၃၅၃.၃၃ )ဧက ကို သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး ဇွန် ၉ ရက်နေ့က တောင်သူ ၄၇ ဦးကို နမ့်စန်မြို့နယ် တရားရုံးမှာ တရားဆိုထားသည်။“ တပ်သိမ်းမြေတွေကို ပိုင်တာက တောင်သူ ၆၄ ဦးပါ။ တရားစွဲဆိုခံရတာက ၄၇ ဦးရှိပါတယ်”ဟု မြေသိမ်းခံရသည့် တောင်သူ ဦးလှထွန်းက သျှမ်းသံတော် ဆင့် ကို ပြောသည်။ အဆိုပါ မြေပေါ်တွင် တောင်သူများ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၉ ခုနစ် ၈ လ ပိုင်းတွင်မူ တပ်ပိုင်မြေဖြစ်ကြောင်း ကနဦးပိုင်ရှင်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရန်အတွက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှတဆင့် အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ကြောင်း ဦးလှထွန်း က ပြောပြသည်။ “တပ်မြေကိုကျူးကျော်စိုက်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ လက်မှတ် ထိုးပေးပေါ့။ လောဆယ် လုပ်စားလို့ရသေးတယ်။ နောက်နိုင်ငံတော်က လုပ်စရာရှိရင်ဖယ်ခိုင်းမယ်။ ကျနော်တို့ တယောက်မှ လက်မှတ်မထိုးသေးဘူး” ဟု ဦးလှထွန်းက ဆိုသည်။
တပ်မှ တောင်သူများကို ၄ ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့ဆုံပြီး လက်မှတ်ထိုးခိုင်းသော်လည်း တောင်သူများက လက်မှတ်မထိုးပေးခဲ့ ကြောင်း၊ အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်လည်း တကြိမ်နှင့်တကြိမ် အစည်းအဝေးလာတက်သူများမတူကြကြောင်း၊ နောက်ဆုံး ခေါ်ယူသည့် ၄ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးလာတက်သည့် တောင်သူ ၄၇ ဦးကို တပ်က ပုဒ်မ ၄၄၇ ဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆို လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
တပ်သိမ်းမြေပေါ်တွင် တောင်သူများနေ့စဉ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေရာ ထိုသို့တပ်မှလာရောက် ဟန့်တားသည့်အပေါ် လက်ရှိ တောင်သူများအတွက် အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရကြောင်းလည်း မြေယာသိမ်းဆည်းခံရသည့် တောင်သူများက ပြောဆိုလိုက်သည်။“ ကျနော်တို့ ရှေ့နေရှာပြီး အမှုရင်ဆိုင်သွားမယ်”ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် တောင်သူတဦးကပြော သည်။ ခိုလမ်မြို့နယ်ရှိ တောင်သူ ၄၇ ဦးကို တပ်မှ တရားစွဲဆိုသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှ ခိုလမ်မြို့ နယ်ခွဲရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တပ်ကို ကြိုးစားဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း မရရှိခဲ့ပေ။ အစိုးရတပ် မြေယာသိမ်းမှုသည် ယခု ရက်ပိုင်း သျှမ်းတောင်ပိုင်းသာမက သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်လည်း သိမ်းဆည်းမှုများရှိနေသဖြင့် သျှမ်းပြည်သူများလည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပွားနေသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/1
ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(KNDP)က လာမည့် ၂၀၂၀ ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက် ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စိစစ်ရွေးချယ်မှုများကို ပြုလုပ်သွားရန်စီစဉ်နေပြီဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို စိစစ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ယခုဇွန်လ ၄ ရက်နေ့က ဖားအံမြို့၊ တော်ဝင်ရတနာ ဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်သော ပါတီလစဉ်အစည်းအဝေးအပြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းထားပြီဖြစ် ကြောင်း KNDP ဥက္ကဋ္ဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက ကေအိုင်စီသို့ ယခုလိုပြောသည်။“၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများကို ရွေးချယ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့လိုက်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရောဂါ(COVID-19)ရဲ့ အခြေအနေ အရ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက်လုပ်မလဲ ဆိုတာလည်း တရားဝင်မကြေငြာသေးဘူးလေ။ ဒါကြောင့် (ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်) ရွေးချယ်ရေးအပြီးသတ်အချိန်ကတော့ ပြောလို့မရသေးဘူးနော်။”ဟု ၎င်းက ယနေ့(ဇွန် ၉ ရက်)တွင် ပြော သည်။
ရွေးချယ်ရေးကော်မရှင်တွင် အရွေးမခံသော နာယကအဖွဲ့များနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့များ၊ ပါတီ၏မြို့နယ်များမှ ၂ ဦး (သို့) ၁ ဦး၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့(CSO)မှ ၂ ဦး စုစုပေါင်း ၂၁ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဆိုပါရွေးချယ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကို ယခု လ အတွင်း အပြီးသတ်ဖွဲ့စည်းရန်လျာထားကြောင်း ဥက္ကဋ္ဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက ဆက်ပြောသည်။ ကရင်ပြည်နယ် အခြေ စိုက် ကရင်ပါတီ ၂ ပါတီဖြစ်သည့် KNDP နှင့် ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့သည် ကရင်ပြည်နယ်တွင်သာ အဓိကထား ယှဉ်ပြိုင်သွားရန်ရှိနေကြောင်း နှစ်ဖက်ပါတီတာဝန် ရှိသူများထံမှ သိရသည်။
ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီ(PSDP) အနေဖြင့်လည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ရွေးချယ်သွားရန် ရှိနေသလို မဲဆန္ဒနယ်မြေ မထပ် ရေးအတွက် KNDP နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖလုံ-စဝေါ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ စောခင်မောင်မြင့်က မေလ ၈ ရက်တွင် ကေအိုင်စီသို့ ပြောခဲ့သည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1 %80%b9%e1%80%a1%e1%
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မွန်ပြည်နယ်တွင် တပ်မဲရုံအပါအဝင် မဲရုံပေါင်း ၉၅၈ ရုံဖွင့်လှစ်ရန် လျာထားသည်ဟု မွန်ပြည် နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးဟိဏ်းလင်းထက်က ပြောသည်။ ဦးဟိဏ်းလင်းထက်က “လက်ရှိမှာ မွန်ပြည်နယ်က မဲဆန္ဒရှင်တွေမဲထည့်နိုင်ဖို့အတွက် မဲရုံ ၉၅၈ ရုံပေါ့နော် အဲဒီမှာတပ်မဲရုံတွေလည်းပါတယ်၊ အခု တပ်မိသားစု တပ်မဲရုံတွေကအပြင်မှာပဲလုပ်မှာပါ၊ အပြင်မှာရပ်ကျေးနဲ့အတူတူပေါင်းထည့်နိုင်အောင် မဲရုံတွေလုပ်ထားတယ်”ဟုဆိုသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်နေ့အထိ ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ နောက်ဆုံးအတည်ပြုထားသောစာရင်းအရ မွန်ပြည်နယ် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ ၁၇ သိန်း ၄ သောင်းကျော်ရှိရာတွင် တပ်မတော်သားများနှင့် မှီခိုသူတပ်မိသားစုဝင် စာရင်း များ မပါရှိသေးပေ။“တပ်မဲရုံတွေကို တပ်ရဲ့အပြင်ဖက်မှာ ထုတ်ထားတယ် သို့သော်ငြားလည်း အဆောက်အဦးမရှိဘူး ရပ်ကျေးနဲ့ ပေါင်းတဲ့အခါကျရင် တစ်မိုင် နှစ်မိုင် သုံးမိုင် လောက်သွားရမယ့်နေရာဆိုရင် ယာယီမဲရုံတွေဆောက်ဖို့ရှိတယ်”ဟု ဦးဟိဏ်းလင်းထက် က ဆက်ပြောသည်။ ထို့ပြင် ပြည်ပမှပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးစေရန် မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်မှုရှိမရှိကို ပြန်လည်စိစစ်နေသည်ဟု မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ မှ သတင်း ရရှိသည်။
လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မဲရုံပေါင်း ၄ သောင်းကျော်လျာထားသဖြင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် အတူတူလောက်ပင်ဖြစ်သော်လည်း ထောင်ဂဏန်းခန့်ပိုနိုင်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက သတင်းထောက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ မွန်ပြည်နယ်တွင် မဲရုံပေါင်း ၉၁၉ ရုံ၊ တပ်တွင်းမဲရုံ ၄၉ ရုံရှိပြီး မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၁၅ သိန်း ၁ သောင်းကျော်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မဲရုံပေါင်း ၄ သောင်းကျော် ဆန္ဒ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၃၃ သန်းကျော် ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းမှတ်တမ်းများက ဖော်ပြသည်။ http://burmese.monnews.org/2020/ 06/10/%e1%81%82%e1%81%80%e1%81% 82%e1%81%80
၈။ ပလက်ဝမြို့နယ် နန်းချောင်းဝကျေးရွာသားတစ်ဦး အမည်မသိလက်နက်ကိုင်တစ်စုမှ ပစ်သတ်ခံရ
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ် စိမ်းစင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ နန်းချောင်းဝကျေးရွာသားတစ်ဦး နန်းချောင်းဝကျေးရွာသို့ အသွားလမ်းခုလတ်တစ်နေရာတွင် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီဝန်းကျင် လက်နက်ကိုင်တစ်စု ပစ်ခတ်ခံရပြီး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
သေဆုံးသူသည် စိမ်းစင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင်ခိုလှုံနေသည့် နန်းချောင်းဝကျေးရွာသား ဦးမျိုးသန့်ဖြစ်ပြီး အသက်(၄၆)နှစ် ရှိကာ ရွာအသွားသူဌေးကုန်းနှင့် လယ်လှရွာကြားတွင်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရကြောင်း ချင်းနေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများ အထောက် အကူပြုကော်မတီမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်အောင်ကပြောသည်။“သူတို့ခိုလှုံတာကတော့ စိမ်းစင်းမှာ ဒီမနက်စီးစမ်းက နေ သူတို့ (၉)နာရီဝန်းကျင် သူတို့ထွက်တာဖြစ်တယ်၊ ဒီရွာကိုသွားတာပေါ့ ပစ္စည်းတွေဘာတွေသွားယူဖို့ သူရွာကိုအဲလို သွား တာ၊ အဲဒီနေရာမှာပစ်ခံရတယ်၊ အဲမှာပွဲခြင်းပဲ ဦးမျိုးသန့်ကတော့ အဲမှာဆုံးသွားတယ်၊ ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ ဘယ်လိုမျိုး ဒဏ်ရာရတာတွေရှိသလဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်သေးသလဲဆိုတဲ့ဟာ ကျနော်တို့အတည်မပြုနိုင်သေးဘူး၊ သူနဲ့အတူ ကားသမား အပါ အဝင် (၂၀) ဦးလောက်ရှိတယ်” ဟု ဦးကျော်အောင်ကပြောသည်။
နန်းချောင်းဝ၊ သူဌေးကုန်းနှင့် လယ်လှရွာတို့သည် စိမ်းစင်းရွာနှင့် (၃) မိုင်ကျော်လောက်သာကွာဝေးပြီးသည့် နေရာတွင် တည်ရှိကြသည်။ သေဆုံးသူ ဦးမျိုးသန့်မှာ သားသမီးနှစ်ယောက်နှင့် ဇနီးကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့သွားရာလမ်းတွင် ပစ်ခတ် သည့်အဖွဲ့မှာလည်း လက်ရှိချိန်ထိ အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရသည်။ စိမ်းစင်းနှင့် နန်းချောင်းဝ၊ သူဌေးကုန်းနှင့် လယ်လှရွာတို့ အနီးနားပတ်ဝန်ကျင်တွင် စစ်တပ်မှ နေရာယူထားပြီး ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) အဖွဲ့လုပ်ရှားမှုမရှိကြောင်းသိရပြီး သေဆုံးသူဦးမျိုးသန့်၏ အလောင်းမှာ ပလက်ဝမြို့သို့ခေါ်ဆောင်မသွားပဲ စီးစမ်းမှာ ပြန်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ချေရှိသည်ဟု ဦးကျော်အောင် က ဆက်ပြောသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73408
ကချင်စစ်ရှောင်များ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်များသဘောတူညီမှု တစ်စုံတစ်ခု ရရှိမှသာလျှင် နေရပ် ပြန်ရေးသည် စိတ်ချရမည်ဖြစ်သည်ဟု ကချင်တိုက်ပွဲ ၉ နှစ်ပြည့်နေ့တွင် ကချင်အမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့က တိုက်တွန်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။ တိုက်ပွဲ ၉ နှစ်ပြည့်အစီစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကချင်အမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ WMR က ယနေ့ မနက် သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲပြုလုပ်စဉ် WMR အကြံပေး သိက္ခာတော်ရဆရာ Rev.Dr. Hkalam Samson က ပြောဆိုခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ‘‘တစ်ခုခု သဘောတူညီမှုရှိမှသာလျှင် နေရပ်ပြန်ရေးဟာစိတ်ချရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် Bilateral က စိတ်ချ မှု တစ်ခုအနေနှင့် လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် တိုက်တွန်းထားခြင်းဖြစ်တယ်။’’ ဟုပြောသည်။
WMR အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် စစ်ရှောင်များ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ လုံခြုံစွာနေရပ်ပြန်ရေး၊ နေရပ်မည့်ဒေသများတွင် သက်ဆိုင် ရာမှ မြေမြုပ်မိုင်းရှင်းလင်းပေးရန်နှင့် စစ်တပ်စခန်းများကို ဆုတ်ခွာပေးရေး၊ နေရပ်ပြန်ရေး ဆန္ဒမရှိသော စစ်ရှောင်များအ တွက် မြေလွတ်မြေရိုင်းများကို နေထိုင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် စီစဉ်ပေးရန်၊ လက်နက်ကိုင်ပဠိပက္ခ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံ တော်အတိုင်ပင်ခံနှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့ထံ တောင်းဆိုချက် စသည်တို့ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် ကချင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပါဝင်သော ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့ Joint Strategy Team ကလည်း ကချင်နှင့် ရှမ်းမြောက် ဒေသ တစ်ကျော့ပြန်တိုက်ပွဲ ၉ နှစ်ပြည့်နေ့တွင် အချက် ၄ ချက်ဖြင့်တောင်းဆိုချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်း တို့မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စစ်ပွဲများချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးရန်၊ IDP များ၏ လူ့အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေး ရန်၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူညီများရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု လုပ် ငန်းများလုပ်ဆောင်နေသော ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်များကို လေးစားရန် စသည့်အချက်တို့ဖြစ် သည်။
မြန်မာပြည်၏ ပြည်တွင်းစစ်ပဠိပက္ခသည် ၁၉၄၇ ပင်လုံစာချုပ်ကတိကဝတ် မဖော်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်သဖြင့် တိုက်ပွဲများအမြန်ရပ်တန့်ကာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်အဖြေရှာရန် ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ကလည်း တောင်းဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ကချင်စစ်ရှောင်များ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ကချင်လူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့ (KHCC) က လုပ်ဆောင်နေသလို ရှမ်းမြောက် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ ၆ တွင်လည်း ရက်ပိုင်းအတွင်း တပ်မတော်နှင့် KIA ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ သည်။ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အပါအဝင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့် အစိုးရတို့ကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ယခုနှစ်ဆန်း တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့တွင် အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံခဲ့သည်မှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး Covid-19 ကြောင့် တွေ့ဆုံမှု ရပ်တန့်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/09/%e180%90% e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1
ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (CNLD) မှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဇူလိုင်လကုန်တွင် အပြီး ကြေညာမည်ဖြစ်ကြောင်း CNLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးငိုင်ဆာခ့်ထံမှသိရသည်။
“ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ မြို့နယ်အသီးသီးမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက လျှောက်လို့ရတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ကိုလျှောက်လို့ရတယ်။ နောက် ၂၇ ရက်နေ့ကို လျှောက်လွှာပိတ်ပြီးတော့ ပဏာမ ရွေးချယ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ရွေးမယ်။
အဲလိုရွေးပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ ဗဟိုကို ဇူလိုင် လ ၁၉ ရက်ထားပြီးတော့ တင်ပြရမယ်။ အဲလိုတင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာ ဗဟိုကနေ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို အပြီးကြေညာမယ်“ဟု CNLD ဥက္ကဋ္ဌ ဦးငိုင်ဆာခ့် မှ ပြောသည်။ ဦးငိုင်ဆာခ့် မှ ဆက်ပြီး “ဗဟိုခေါင်းဆောင်ထဲမှာ လောလောဆယ်တော့ မသိသေးပေမယ့် ဥက္ကဋ္ဌ သုံးယောက်စလုံးကတော့ ပြိုင်မယ် ပေါ့နော် ဒီသုံးယောက်ကတော့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်ပေါ့။ နောက် ဗဟိုကော်မတီ EC ထဲမှာလည်း ပြိုင်မယ့်သူလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်မယ့်သူက လေးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိမယ်”ဟု ဆက်ပြီးပြောသည်။
လျှောက်လွှာလက်ခံရာတွင် မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုတွင် နှစ်ယောက် သုံးယောက် ထပ်မည်ဆိုလျှင် မြို့နယ်ကော်မတီမှ ညှိနှိုင်းမည် ဖြစ်ပြီး ထပ်မံအဆင်မပြေပါက မြို့နယ်ကော်မတီမှ မဲဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး မဲအများရရှိသူသည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယမဲ အများဆုံးရရှိသူသည် အရံအဖြစ်ထားရှိမည်ဟုလည်းသိရသည်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ရွေးကောက်ပွဲကိုပုံမှန်ကျင်းပသည့်အတိုင်း နိုဝင်ဘာလထဲတွင် ကျင်းပမည်ဟုမီဒီယာများထံဖြေကြားထားသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73359
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသနိုင်ရန်အတွက် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/ သျှမ်းပြည်တပ် မတော် (RCSS/SSA) ရရှိသည့် ပစ္စည်းများကို ခက်ခဲသည့်နေရာသို့ ပြန်လည်ခွဲပေးမည် ဟု စုံစမ်းသိရသည်။
RCSS/SSA သည် ယခု ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ထောက်ပံ့ ပစ္စည်း ၃ ကြိမ် လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်း ချုပ် ကုသနိုင်ရန်အတွက် RCSS/SSA ကို မေ ၂၆ ရက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနက တကြိမ်၊ ဇွန် ၄ ရက်တွင် အရှေ့ ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ တကြိမ် နှင့် ဇွန် ၈ ရက်တွင် သျှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူလူထု စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီမှ တစ်ကြိမ် ပေးခဲ့ကြောင်း RCSS/SSA ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြော သည်။“ ကျနော်တို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ထောက်ပံ့မှု ရတာ ၃ ကြိမ်ပါ။ ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို လိုအပ် တဲ့ စားနပ်ရိက္ခာကို အခက်ခဲ ကြုံနေတဲ့ နေရာမှာ ပြန်ပြီး ခွဲဝေပေးမယ်” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး က ဆိုသည်။
ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများကို RCSS/SSA မှ သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ မြို့နယ်တိုင်းတွင် ဖွဲ့ထားသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေး ကော်မတီလက်ထဲ အရောက်ပို့ပေးသွားမည်ဟုလည်း ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစဝ်အုမ်ခေး က ပြောသည်။ “အစိုးရဌာနနဲ့ စစ်တပ် နှစ်ဖွဲ့ ပေါင်းရင် ထောက်ပံ့ပစ္စည်း ၁၀ မျိုးကျော်တယ်။ တစ်နေရာကို four wheels ကား ၂ စီး လောက်ရှိတယ်။ စားနပ်ရိက္ခာ ဘက်ကတော့ ဆန် ၂၄ ပြည်အိတ် က အိတ်ပေါင်း ၃၀ဝ နဲ့ ဆီ ၁၀ ပိဿာပုံးက ပုံး ၃၀ လက်ခံရရှိခဲ့တယ်” ဟု RCSS/SSA ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေး ကပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းပေးသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး စဝ်အုမ်ခေးက “ ဒါက တစ်တိုင်း ပြည်လုံး တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်ဆိုတော့ ဒါကတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပ လို့ မြင်ပါတယ်”ဟု ထပ်လောင်းပြောသည်။ တဖက်တွင်လည်း အစိုးရတပ်မတော် နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဇွန် ၃ ရက်နေ့က သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ပုံပါကျင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ RCSS/SSA တပ်စခန်းကို ပစ်ခတ်ခဲ့သေးကြောင်း သိရသည်။“နယ်မြေဒေသရဲ့ နားလည်မှု လွဲနေတာကြောင့် ထိတွေ့မှုတွေ နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အကြီးအကျယ် တော့ မဟုတ်ဘူး” ဟု RCSS/SSA ၏ ပြောခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စဝ်အုမ်ခေးက ပြောသည်။ https://burmese.shanne ws.org/archives/17023
လာမယ့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ – ၂၁ရာစုပင်လုံ စတုတ္တအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပမယ့် အချိန်နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဒီလ ၁၁ရက်နေ့ ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAO တွေရဲ့ကိုယ်စား NCA အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ရဲဘော်မျိုးဝင်းက အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ “ အစိုးရဘက်က အဆိုပြုထားတာကတော့ ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ကျင်းပချင်တယ်ဆိုပြီး အစိုးရဘက်က အဆိုပြုထားတယ်။ အစိုးရဘက်က အဆိုပြုချက်ပေါ်မှာ အခြေခံပြီးမှ EAO ပြန်လည်အဆိုပြုဖို့အတွက်ကို ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်ထားတာကတော့ ဒီ သြဂုတ်လအတွင်းပေါ့။” သြဂုတ်လအတွင်းကျင်းပဖို့ကို EAOအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဒီလ ၁၀ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ online အစည်းအဝေးကနေ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စတုတ္တအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံအစည်းအဝေးမှာ ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ် အပိုင်း ၃ကို ချုပ်ဆိုသွားဖို့အတွက် ညှိနှိုင်နေကြောင်း ရဲဘော်မျိုးဝင်းက ဆက်ပြောပါတယ်။
“ ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကို အပိုင်း ၃ပိုင်းနဲ့ ချုပ်ဆိုသွားဖို့အတွက်ကို ကျနော်တို့ JICM မှာ သဘောတူထားတယ်။ အပိုင်း၁ကတော့ NCA အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီချက်။ အပိုင်း ၂က တော့ ၂၀၂၀ အလွန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် အဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ အဆင့်လိုက်အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုတဲ့ အပိုင်း ၂ ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးနေတယ်။ အပိုင်း ၃ကျတော့ အခြေခံမူ သဘောတူညီချက်ပေါ့။ အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ဘယ်လိုအခြေခံမူနဲ့ ပုံဖော်သွားမလဲဆိုတဲ့ လမ်းညွှန် မှုများကို ချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ ချုပ်ဆိုသွားနိုင်ဖို့ကို အလုပ်အဖွဲ့တွေ ညှိနှိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။” ပြည်ထောင် စု သဘောတူစာချုပ် အပိုင်း ၃မှာ ပါဝင်မယ့် အချက် ၃ချက်ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလက ကျင်းပတဲ့ JICM ခေါ် တစ်နိုင်ငံ လုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာ အစိုးရ၊လွှတ်တော်က ကိုယ်စားလှယ်၊တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်၊ EAO ကိုယ်စားလှယ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ် ၁၅၀ စီ၊ ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူနဲ့ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ၅၀ စီပါဝင်ရာ က လာမယ့် ညီလာခံမှာတော့ ၃ ပုံ ၁ ပုံအထိ လျော့ချသွားဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်တွေကိုတော့ ဇွန်လ ၂၃ရက်နေ့ကနေ ၂၅ရက်နေ့အထိ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ ညှိနှိုင်းသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/covid-10-myanmar-21-century-pinglong-/545924 6.html
ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ လုံးစွတ်စစ်ရှောင်ပြည်သူများ နေရပ်ပြန်ရေးအဆင်မပြေတော့သဖြင့် သီးခြား နေရာချထားပေးရန် ကချင်လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုအဖွဲ့ KHCC က စီစဉ်နေပြီဟု သိရသည်။
မြေနေရာချပေးရန် အစိုးရနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး မြေကွက်တိုင်တာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပြီဟု KHCC ဥက္ကဌ Rev.Dr.Hkalam SamSon က ယခုလို ပြောဆိုသည်။“ကျနော်တို့ ပူတာအိုစစ်ရှောင်တွေအတွက် တရားဝင်ချပေးဖို့ မြေတွေဝယ်ပြီးမှ လုပ်ငန်းစနေပြီ။ သူတို့က မူလနေရာကို ပြန်ဖို့ လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်တော့မြေနေရာတွေကို ချပေးဖို့တောင်းဆိုတာပေါ့။ အဲ့တော့ ကျနော်တို့က အစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်နေရတာပေါ့။ အဲ့ကြောင့်အခု သူတို့နေမယ့် နေရာကိုလည်း သတ်မှတ်ထား ပြီဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ လုံးစွတ်စစ်ရှောင်ပြည်သူများက နဂိုမူလဒေသသို့ ပြန်လည်နေထိုင်ရန် အခက်အခဲရှိနေသဖြင့် မြေနေရာ အသစ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချပေးရန် KHCC နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ အကြောင်းကြားတောင်းဆိုပေးရန်အတွက် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းတွင် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC သို့ စာပေးပို့ခဲ့သည်။
လုံးစွတ်စစ်ရှောင် အိမ်ထောင်စု ၇၇ ခု၊ လူဦးရေ ၃၀၀ ကျော်အတွက် အစိုးရနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး မချမ်းဘော့မြို့နယ်အတွင်းရှိ စီဒမ် (Tsi Dam Pa) ကျေးရွာအနီးတွင် ချပေးရန်စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။ KHCC မှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖြစ်စီစဉ်ပေး မည့် မြေနေရာသည် လက်ရှိနေထိုင်သည့် လုံးစွတ်စစ်ရှောင်စခန်း နှင့် ၁၂မိုင်ကျော် ဝေးလံနေသောကြောင့် စစ်ရှောင်တချို့ က စိုးရိမ်မှုရှိနေကြောင်း တာဝန်ခံ ဦးဖုန်ထိက ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ပြောသည်။“ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အခုစီစဉ်ပေးနေ တဲ့ နေရာထက်ပိုကောင်းတဲ့ နေရာမှာရစေချင်တာပေါ့လေ။ အခုဒီဘက်မှာ က ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မြေနေရာရဖို့က ခဲယဉ်းသွားပြီ ဆိုတာတော့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်ရှောင်တွေက မြို့နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ နေရာမှာ ရချင်တယ်။ အခုက သိပ်စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိဘူးပေါ့” ဟုပြောသည်။
လုံးစွတ်စစ်ရှောင်စခန်းတွင် တိမ်းရှောင်နေသည့် စစ်ရှောင်ပြည်သူများမှာ လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မချမ်းဘော့မြို့နယ် အင်ခါးဂါး၊ အင်ဖျီဂါ၊ ဖကန်းနှင့် နှင်းတန်ဂေါင်း စသည့်ကျေးရွာများတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာသဖြင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် လာသူများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် မူရင်းဒေသသို့ နေရပ်ပြန်မည်ဆိုသော်လည်း အပြန်လမ်းမပေါ်တွင် အစိုးရတပ်မတော် တပ်စခန်းတည်ရှိနေသောကြောင့် အခက်အခဲ ရှိနေသည်ဟု ပြောဆိုနေကြသည်။ https://burmese.kachinnews.c om/2020/06/11/%e1%80%95%e1%80%b0%e1%80%90%e1%80%ac%e1
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နယ်၊ အမြင့်ကျွန်းကျေးရွာမှာ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က တပ်မတော်ရေယာဉ်မှ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ် မှုကြောင့် ကျေးရွာရှိ အဘွားအို ၁ ဦး သေဆုံးပြီး ကျောင်းသူ ၁ ဦးအပါအဝင် ၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ ဒေသခံ တွေက ပြောပါတယ်။
မနေ့ညက တပ်မတော်ရေယာဉ်မှကျေးရွာအတွင်းကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် နေအိမ်ဝရန်တာမှာ အိပ်ပျော် နေတဲ့ ညီအစ်မနှစ်ဦးထဲက အမအကြီးဖြစ်တဲ့ မနန္ဒာဝင်း(၇)တန်း ကျောင်းသူမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ စစ်တွေဆေးရုံမှာ ဆေးကုသ မှုခံယူနေရတယ်လို့ မိခင် ဒေါ်အေးအေးကြည်က ပြောပါတယ်။“ည ၁၂ နာရီလောက်မှာပေါ့ ရေတပ်ကနေပြီး ပစ်လို့လာတယ်။ ကျမတို့က ပထမ ရဲစခန်းကနေပြီး ပစ်တာလို့ထင်တယ်။ ကျမတို့ အိမ်က လမ်းထိပ်မှာ ဖြစ်နေတာဆိုတော့ သမီး နှစ်ယောက်က ဝရန်တာမှာအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ လက်နက်ကြီးကျတော့ အစွန်မှာအိပ်နေတဲ့ အစ်ကြီးမကို သွားထိတာ ပေါ့၊ ဒဏ်ရာကတော့ ခေါင်းရယ် ၊ လည်ပင့်း၏နဲ့ လက်မောင်းတို့ကို ထိသွားတာပေါ့။”လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရွာမှာရှိတဲ့ အသက် ၈၀ ကျော်အရွယ် အဘွားအိုတစ်ဦးသေဆုံးသွားပြီး အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ် ၁ ဦးနဲ့ ကျေးရွာနေသူ တချို့ဒဏ်ရာရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဇွန် ၉ ရက်ညက စစ်တွေမြို့မှ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့ဘက်သို့ မြင်းဝါ ချောင်းအတိုင်း ထွက်ခွာလာတဲ့ တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေယာဉ် ၃ စီးကို အမြင့်ကျွန်းကျေးရွာအနီးမှာ အေအေအဖွဲ့က လက်နက်ကြီး/လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အေအေ အဖွဲ့အနေနဲ့ တပ်မတော်ရေယာဉ်တွေ လာပါက ငါးဖမ်းပိုက်တွေကို အရပ်သား အယောင်ဆောင်ပြီး ချထားလေ့ရှိသလို သင်္ဘောကမ်းကပ်လာတဲ့အခါမှာ အခုလို တိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေ လုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဒီဗွီဘီကိုပြောထားပါတယ်။ တပ်မတော်ဘက်က ပြန်လည်ပစ်ခတ်တဲ့အခါမှာတော့ အရပ်သား သေဆုံးတယ်ဆိုပြီး အေအေဘက်က ထုတ်ပြန်ပြောဆို လေ့ရှိတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/393638
မွန်ပြည်နယ် တစ်ပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတိုင်အတာအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်မရှိသေးသည့် ကရင်တိုင်းရင်းသားလူဦးရေ ၅၀,၀၀၀ (ငါးသောင်း)အကျော်အထိ ရှိနေနိုင်သေးကြောင်း မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီး စောအောင်မြင့်ခိုင် က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် ကရင်လူမျိုးအများစု နေထိုင်သည့် ကျေးရွာအုပ်စု ၂၇၀ အုပ်စုကျော်ရှိပြီး ကျေရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အချို့၏တင်ပြလာသည့် မှတ်ပုံတင်မရှိသူ ဦးရေစာရင်းအရ ထိုသို့ ပြောဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီး စောအောင်မြင့်ခိုင်က ပြောသည်။ ဝန်ကြီးက “ကျိုက်မရောမြို့နယ် မိကသစ်ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုကို ကောက် ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီကျေးရွာအုပ်စုမှာ လူဦးရေတစ်ထောင်ကျော် မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ဖို့ ကျန်ရှိတဲ့စာရင်းကို ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက စာရင်းတင်လာတယ်။ ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုထဲကိုပဲ တစ်ထောင်ကျော်ကျန်တော့ ကျိုက်မရောမြို့ နယ် တစ်မြို့နယ်လုံးဆိုရင် အကြမ်းအားဖြင့်က မှတ်ပုံတင်မရှိတာ ငါးထောင်ကျော်ရှိနိုင်တယ်။ ကရင်လူဦးရေများတဲ့ သထုံ တို့၊ ဘီးလင်းတို့ဆိုရင်တော့ အဲလောက် များနိုင်တယ်။ ၁၀ မြို့နယ်လုံး ခန့်မှန်းခြေအရဆိုရင် ငါးသောင်းကျော်မက ရှိနိုင် တယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းနိုင်တာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ မှတ်ပုံတင်မရရှိသေးသူများမှာ အသက် ၁၅ နှစ်မှစပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုများအထိပါဝင်ကာ အများစုမှာ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကြောင့် ရုံးအထိသွားရောက်မပြုလုပ်ချင်သူများရှိသလို အချို့မှာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ကွင်းဆင်း မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ပေးသည့်အချိန်တွင် အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့် မပြုလုပ်ဖြစ်ကြသူများလည်း ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။“ကျနော်တို့ ကရင်တွေအများစု ကျနော်တွေ့တာက လဝကရုံးကိုသွားဖို့ ခရီးကအရမ်းဝေးတယ်။ သွားလုပ်တော့ စာရွက်စာတမ်းလိုအပ် တော့ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွား၊ ပြန်လုပ်အခေါက်ရေများတော့ သွားလာစရိတ်တွေက ပိုကုန်လာတယ်။ တချို့ လဝက ဝန်ထမ်းက သူတို့တွေကို အပြည့်အဝမပေးနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုရှိရင်လည်းရှိနိုင်တော့ မသွားလုပ်ချင်ကြတာ လည်းရှိမယ်။ မှတ်ပုံတင်မရှိရင် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုတွေတော့ရှိမှာပဲ။ ကိုယ်တိုင်မသွား လုပ်တတ်ရင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ ပါတီဝင်တွေ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေအကူညီတောင်းလို့ရပါတယ်”ဟုဝန်ကြီး စောအောင်မြင့်ခိုင်က ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် သထုံ၊ ဘီးလင်း၊ ကျိုက်မရော၊ အပေါင်၊ ရေး၊ ကျိုက်ထို၊ ချောင်းဆုံ၊ သံဖြူဇရပ်၊ မော်လမြိုင် နှင့် မုဒုံ စ သည့် မြို့နယ် ၁၀မြို့နယ်ရှိကာ မြို့နယ်တိုင်းတွင် ကရင်လူမျိုးများနေထိုင်လျက်ရှိပြီး အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန စာ ရင်းအရ ကရင်လူဦးရေ သုံးသိန်းနီးပါးရှိသည်ဟု မွန်ပြည်နယ် ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး စောအောင်မြင့်ခိုင်၏ ပြောပြချက်များအရ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%90%e1%8 0%b9%e1%80%95%e1%
မှတ်ပုံတင်မရှိသည့် ကရင်နီ ဒုက္ခသည်များသည် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးရန် ဆန္ဒရှိနေသည်ဟု ကရင်နီ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးရွှေမျိုးသန့်က ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။ အဆိုပါ ဒုက္ခသည် များသည် ပြည်တွင်းစစ်များကြောင့် ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကတည်းက ထွက်ပြေးလာကြပြီး ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်တွင် ဒုက္ခ သည်များအဖြစ် မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စု ဇယားများမရှိဘဲ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) မှ ထုတ်ပေးထားသည့် ကတ်ဖြင့်သာ နေထိုင်ကြရသူများဖြစ်သည်။ ဦးရွှေမျိုးသန့်က“သူတို့လည်း မဲပေးခွင့် ရချင်တာပေါ့။ ကျနော်ထင်တာတော့ သူတို့ မဲပေးခွင့်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့မှာ မှတ်ပုံတင်မရှိဘူးလေ။ မဲပေးဖို့ဆို မှတ်ပုံတင် ရှိဖို့လိုသလို မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှာ သူတို့ နာမည်တွေ ပါဖို့လိုတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်နယ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်ကို ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်နိုင်ရင် ပြည်နယ် အစိုးရကို ကိုယ့်ဘာသာ ဖွဲ့လို့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်တွင် ဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း ၉ ခု ရှိရာ ကယားပြည်နယ်နှင့် ထိစပ်လျက်နေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင် ဆောင် ခရိုင်ရှိ ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်း ၂ ခုလည်း ပါဝင်သည်။ ထိုကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်း အမှတ် ၁ နှင့် ၂ ရှိတွင် ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၁၀၂၈၂ ဦး ရှိသည့်အနက် မဲပေးနိုင်သူဦး ရေ ၉ ထောင် နီးပါးရှိသည်ဟု စခန်းတာဝန်ခံများထံက သိရ သည်။ ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်း အမှတ် ၁ ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ရောက်ရှိလာခဲ့သည့် ဒုက္ခသည် ဦးမီရယ်က “ကျနော်တို့ စခန်း ဘက်ကို မဲပေးဖို့ လာပြောကြတော့ ကျနော်တို့လည်း မဲပေးချင်တယ်။ ကျနော်တို့က နိုင်ငံမဲ့တွေလို ခံစားနေရတယ်။ ထိုင်းက လည်း နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မခံဘူး။ မြန်မာပြည်မှာကလည်း နိုင်ငံသား အထောက်အထားဘာမှ မရှိတော့။ တကယ်လို့ မဲ ပေးခွင့် ရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က ဒီနိုင်ငံသား ဖြစ်သွားမှာပေါ့”ဟု ပြော သည်။
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကယားပြည်နယ်တွင် မည်သည့်ကတ်မှ ကိုင်ဆောင်ခြင်းမရှိသူ ၁၉၂၃၈ ဦး ရှိရာ ၂၀၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲတွင် ထိုမှတ်ပုံတင်မရှိသူများ မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဟု ကယားပြည်နယ်ရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သည့် Lain Technical Support Group (LAIN) နည်းပညာ အထောက် အကူပြုအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ထင်အောင်က ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မည်သည့်ကတ်မှ ကိုင်ဆောင်ခြင်း မရှိသူများကို စီမံချက်ဖြင့် မှတ်ပုံတင် လုပ် ဆောင်မပေးပါက လာမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးနိုင်သူများ ရှိလာနိုင်သည်ဟု ၎င်းက သုံးသပ်ထားသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းမှ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ် အရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေသည့် ကရင်နီ အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (KNOW) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်မီးမီးကလည်း “မှတ်ပုံတင် မရှိလို့ ၂၀၁၅ တုန်းက မဲမပေးခဲ့ရတော့ သူတို့က ၂၀၂၀ မှာတော့ မဲပေးချင် နေကြတယ်။ အမှန်က ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက နိုင်ငံသားတွေပဲလေ။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လို့သာ ထွက်ပြေးလာရတယ်။ သူတို့အိမ်တွေ မီးရှို့ခံရနဲ့ သူတို့အသက်စွန့်ပြေးလာရတဲ့ သူတွေပါ။ အဲဒီတော့ သူတို့ကိုလည်း နိုင်ငံသားအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုသလို မဲပေးပိုင်ခွင့်ပေးဖို့လည်း လိုတယ်” ဟု ဆိုသည်။
KNPP သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လက တပ်မတော်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ၃ လ အကြာတွင် ပျက်ပြယ်သွားခဲ့သည်။ တဖန်၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် KNPP နှင့် အစိုးရ ပြည်နယ်အဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် ၎င်းတို့၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုများအပါအဝင် ဒုက္ခသည်များကိုလည်း မှတ်ပုံတင်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကိစ္စရပ်များထည့်သွင်း တောင်းဆိုခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။ https://burma.irrawad dy.com/news/2020/06/12/224485.html
ပြိုကျခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းရာချီရှိသည့် ပင်လောင်းဟော်နန်းကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မေ ၁၉ ရက်တွင် ပြိုကျခဲ့သည့် သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လောင်းမြို့၏ နှစ်ပေါင်းရာချီ အမွေအနှစ်ဟော်နန်းကို ပြန်လည် ထိန်းသိမ်း ရန်အတွက် ဇွန် ၂ ရက်နက် ၆ နာရီမှာ သျှမ်းရိုးရာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာဖြင့် ခွင့်တောင်းပွဲကို မွေတော်ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက် ဆရာတော်က လာရောက်ချီးမြှင့် ပေးခဲ့သည်။
“ဟော်နန်း ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းတဲ့ သဘောပဲပေါ့။ သူ့ရဲ့အုတ်ရိုးတွေ အုတ်ခုံတွေ မပျက်စီးသွားအောင် ပြိုနေတဲ့အရာကို လည်း ပြိုတဲ့အတိုင်းပဲ ထားထားမှာပါ” ဟော်နန်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်သည့် စိုင်းခွန်မိန်းခမ်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ လက်ရှိ မပျက်စီးသေးသည့် အုတ်ရိုး၊ အုတ်ခုံများကို ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ မြို့ဟောင်းများ ထိန်းသိမ်းသကဲ့သို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဟု စိုင်းခွန်မိန်းခမ်း ကပြောပြသည်။“ရန်ပုံငွေ ရှိပြီးတော့ ထလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ခန့်မှန်းခြေ သိန်း ၅၀ လောက်ကုန်မယ်။ ရှာလိုက် လုပ်လိုက်တဲ့နဲ့ပဲ ငွေရေး ကြေးရေးတော့ အခက်ခဲ ရှိတယ်” ဟု စိုင်းခွန်မိန်းခမ်း က ဆိုသည်။
ပင်လောင်းမြို့သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်လည့်ပတ်မှု များပြားသည့်အတွက် ဟော်နန်း၏ သမိုင်းအထောအထားများ ပြသပြီး ဟော်နန်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဖြစ်သည်။ ပင်လောင်း ဟော်နန်းပြန်လည် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဟော်နန်း မိသားစုဝင်များ၊ သျှမ်းလူငယ်များ ၊ သျှမ်းသံယာတော်များ ပူးပေါင်းပြီး ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/17047
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ပေါ် အေးစေတီဘုရား အနီးတွင် ယနေ့မနက် ၇ နာရီခန့်က ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) အဖွဲ့ဝင်များ က တပ်မတော် အရာရှိ ၁ ဦးကို ဓားဖြင့်ထိုးသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးက အတည်ပြုသည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း က “ပုဏ္ဏားကျွန်းမှာ ဒီမနက်အဲဒီမှာရှိတဲ့ တပ်ရင်းတရင်းက စစ် သည်တချို့ ဈေးဝယ်သွားတာ၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ ဈေးဝယ်သွားတာဖြစ်တယ်။ တယောက်ကတော့ အရာရှိနဲ့စစ်သည် တယောက် ပေါ့။ ပြောရရင်တော့ AA ပါပဲ။ AA အဖွဲ့ဝင်တွေက ဝိုင်းဝန်းချုပ်နှောင်ပြီးတော့ ပထမဆုံးရိုက်နှက်တယ်။ ပြီးရင် လက်ထိပ်ခတ် တယ်။ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ဓားနဲ့ထိုးသွားတယ်။ အရာရှိကတော့ ဆုံးသွားပြီလို့ သိရတယ်။ ရဲကတော့ စစ်ဆေးတာတွေ ဆောင်ရွက်နေတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
AA ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသဖြင့် ထိုဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ပုဏ္ဏားကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သန်းတင်က“ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ အေးစေတီဘုရားအ နီးမှာအရာရှိ ၁ ဦးကို ဓားနဲ့ထိုးပြီးတော့ ၁ ဦးကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်လို့ကြားတယ်။ မြို့ခံတွေကလည်း အိမ်ထဲကမထွက်ရဲကြ တဲ့အတွက် အသေးစိတ်ကိုတော့ မသိဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် တပ်မတော်သားများ နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ဖမ်းဆီးခေါင်းဆောင်သွားသူများနောက်သို့ လိုက်လံကာ ရှာဖွေနေကြောင်းလည်းသိရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက် မြို့ပေါ်၌ သေနတ်ပစ်ခတ်သံများကို ကြားနေပြီး ဈေးဆိုင်တန်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရောင်းချ သော ပျံကျဈေးသည်များမှာလည်း ကြောက်လန့်ကြကာ ဆိုင်အားလုံး ပိတ်ထားရကြောင်းလည်း ဒေသခံများက ပြောသည်။ https://burma.irraw addy.com/news/2020/06/11/224447.html
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့လယ် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးရှေ့ အုတ်တံတိုင်းအနီး ရပ်ထားသော သုံးဘီးဆိုင်ကယ် အောက်တွင် ယမန်နေ့ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ည ၈း၅၀ အချိန်ခန့် က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပေါက်ကွဲမှုမှာ ဗုံးသီးဟောင်းအား ဒီတိုနီတာ တပ်ဆင်၍ ချိန်ကိုက်မိုင်းပုံစံအ သုံးပြု၍ ဖောက်ခွဲခဲ့သည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကတ္တရာလမ်း (၆)လက်မပတ်လည်၊ အနက် ၀.၅ လက်မ ခန့်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ် နောက်တွဲ ကြမ်းခင်း၌ ဗုံးစထိမှန်၍ အပေါက် ၅ ပေါက်ခန့်၊ ဆိုင်ကယ်ယာဉ် မောင်းထိုင်ခုံအောက်ရှိ ဆီတိုင်ကီနှင့်ဝါယာထုပ်များ လွင့်စင် သွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဆန့်ကျင်ဘက်ယာဉ်ကျောအတိုင်း မြဝတီမြို့ပြင်ဘက်မှမြို့တွင်းသို့ မောင်းနှင်လာ သည့်ဝေါ်လေမြို့၊ ထီးသဲလယ်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဥူးဝါယမ၊ သက်တော် ၄၇ နှစ်၊ ဝါတော် ၂၇ ဝါနှင့် ယာဉ်မောင်း ဥူးပညာဝံသ၊ သက် တော် ၄၄ နှစ် မောင်းနှင်သည့် Surf (အပြာရောင်)ယာဉ်အား ဝဲဘက်ခြမ်းရှေ့တံခါးဗုံးစလွင့်စင်၍ (၂)ချက်ထိမှန်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဗုံးသီးစသည် တံခါးအားဖောက်ဝင်ကာ ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ ဥူးပညာဝံသ၏ ဝဲဘက်ခြေသလုံး ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ (မစိုးရိမ်ရ)ရရှိခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
၎င်းဗုံးပေါက်ကွဲရာနေရာသို့ မြဝတီရှေ့တန်းရုံး တပ်မတော်ခြေလျင်တပ်ရင်း(၉၇)မှ တပ်မတော်တာဝန်ရှိသူများ၊ ခရိုင်ရဲတပ် ဖွဲ့ ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် တာဝနိရှိသူများမှ ဖြစ်စဉ်ကို စစ်ဆေး မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိုသို့ ဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့သူအား မြဝတီမြို့မရဲ စခန်းက (ပ)၄၁၃/၂၀၂၀၊ ပေါက်ကွဲ-၃ ဖြင့် အမှုရေးဖွင့်ထားပြီး တရားခံအား ဖမ်းဆီးရမိနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထိုသို့ ဗုံးပေါက် ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နေရာတွင် မြဝတီမြို့ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးဘေး ခရိုင်ရဲ တပ်ဖွဲ့ရုံးရှေ့ အုတ်တံတိုင်းနှင့် ၁၀ ပေခန့် အကွာတွင်ဖြစ်ပြီး အနီးဝန်းကျင်တွင် တပ်မတော်ရှေ့တန်းရုံး၊ အကောက်ခွန်ရုံးနှင့် ယာဉ်ထိန်းရုံးတို့ရှိသည့်အတွက် ဖောက်ခွဲ သူ၏ ရည် ရွယ်ချက်အပေါ် မြို့ခံပြည်သူများမှ ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးပေး၍ ဝေဖန်မှုမြင့်တက် လျက်ရှိသည်။
၎င်းအပြင် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ ည ၈း၁၅ အချိန်ခန့်ကလည်း မြဝတီမြို့နှင့်နယ်နိမိတ် ထိစပ် နေသည့် ကော့ကရိတ်မြို့မရဲစခန်း အရှေ့တွင် အလားတူ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့၍ အကြောင်း အရာနှစ်ခု ဆက်စပ်မှု ရှိနိုင်သည်ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိနေသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80% ae%e1%8
ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးဘက်မှ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့သို့ တက္ကစီယာဉ် ၂ စီးအား စင်းလုံးငှါးလာသည့် အထောက်အထားမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၈ ဦးကို (ဇွန်လ ၁၁ ရက်) ၁၀း၃၀ အချိန်ခန့်က မြဝတီမြို့ အမှတ်( ၄) ရပ်ကွက် အာရှလမ်း မြေနီကုန်း လမ်းဆုံနေရာတွင် ယာဉ်ကြောစစ်ဆေးရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် နယ်မြေ တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နံနက် ၁၀း၃၀ အချိန်တွင် မြဝတီမြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အာရှလမ်း၊ မြေနီကုန်းလမ်းဆုံတွင် မြဝတီရှေ့တန်ရုံး ခြေလျင်တပ် ရင်း (၉၇)မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြဝတီမြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သည့် ပူးပေါင်း အဖွဲ့သည် လမ်းပေါ်တွင် ဖြတ်သန်း သွားလာလျက်ရှိသော မော်တော်ယာဉ်များအား လက်နက်/ခဲယမ်းများ သယ်ဆောင်မှုရှိ/မရှိ ရပ်တန့်ရှာဖွေစစ်ဆေးနေစဉ် သင်္ဃန်းညီနောင်ဘက်မှ မြဝတီမြို့တွင်းဘက်သို့ မောင်းနှင်လာသည့် တက္ကစီယာဉ် ၂ စီးအားစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၎င်းယာဉ်(၂)စီးပေါ်တွင် ပတ်စ်ပို့ စာအုပ်သာပါရှိကာ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမပါရှိသူ ကျား (၅)ဦးနှင့် မ(၁)ဦး နှင့် မည် သည့် အထောက်အထားမျှ မပါသောကျား(၂)ဦး စုစုပေါင်း တရုတ်နိုင်ငံသား ၈ ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိပြီး မြဝတီခရိုင် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးရုံးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ တရုတ်နိုင်ငံသား ၈ ဦးသည် ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးမြို့မှ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့သို့ မော်တော်ယာဉ်ခ (၅)သိန်း ကျပ်ဖြင့် တင်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့တွင် ပတ်စ်ပို့စာအုပ်များပါရှိပြီး အထောက်အထား ပြည်စုံမှုရှိမရှိကို မိမိတို့အနေဖြင့်မသိ၍ သာမန်ခရီးသွားပုံစံဖြင့် တင်ဆောင်လာခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ယာဉ်မောင်း ၂ ဦးက ပြောဆိုခဲ့သည်။ အထောက်အထားမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၈ ဦးနှင့် ၎င်းတို့အား တင်ဆောင်လာသူ ယာဉ်မောင်း၂ ဦးကို မြဝတီခရိုင် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးပြီးနောက် တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်သွားမည်ဟု သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%9c%e1%80 %ac%e1%80%b 8%e1%82%90%e1%82%88%e1%80
အီးမေးလ်ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ် ကျောက်ခုတ်နဲ့ သစ်ပုတ်တောင် ကျေးရွာကြားမှာ ဇွန်လ ၁၀ ရက် မနက် အစော ပိုင်းက ပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပြီးနောက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သံတွေ ကြားရတာကြောင့် ဒေသခံ ၆ ထောင်နီးပါးဟာ နီးစပ်ရာ ကျေးရွာတွေကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ ကျောက်ခုတ် ကျေးရွာကနေ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းထွက်သွားပြီး မိုင်ဝက်လောက် အရောက်မှာ ပေါက်ကွဲသံကြားရပြီး ပစ်ခတ်သံတွေ ကြားရတာကြောင့် ရွာသားတွေဟာ တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးမှာကို စိုးရိမ်ပြီး နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေကို ထွက်ပြေးနေတယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ကျောက်ခုတ်ရွာသားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက သစ်ပုတ်တောင်ကျေးရွာထဲကို ဝင်လာတာကြောင့် တစ်ရွာလုံး ကြောက် လန့် ထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ အမည်မဖော်လို့တဲ့ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ သစ်ပုတ်တောင်မှာ ရွာသား ၆ ဦးကို တပ်မတော်က ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာ ဖမ်းဆီးထားပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ရွာသားတွေကို ပြန်ခေါ်ပေးဖို့၊ ပြန်မခေါ်ပေးရင် ရွာကိုမီးရှို့မယ်ဆိုတာမျိုး ရပ်မိရပ်ဖတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ မနေ့တုန်းက လှေတွေနဲ့ ထွက်ပြေးရာမှာ တပ်မတော်က သေနတ်နဲ့ လိုက်လံပစ်ခတ်တာတွေ ရှိတာကြောင့် ရွာကိုမပြန်ရဲဘူးလို့ အမည်မဖော်လို့တဲ့ ရွာသားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ကျောက်ခုတ်ကျေးရွာမှာ ဇွန်လ၉ရက်နေ့တုန်းက တပ်မတော် စစ်ကြောင်းဝင်လာပြီး အရပ် သား ၇ ဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ မနေ့က ဇွန်လ ၁၀ ရက် မနက်ပိုင်းကမှ သူတို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာ လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ကျောက်ခုတ်ကျေးရွာဟာ အိမ်ခြေ ၆၀ဝ နီးပါးရှိပြီး လူဦးရေ သုံးထောင်ကျော်ရှိသလို သစ်ပုတ်တောင် ကျေးရွာမှာလည်း အိမ်ခြေ ၄၀ဝ ကျော်ရှိပြီး လူဦးရေ သုံးထောင် ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ မင်းပြားပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှသိန်းအောင်ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က ကျောက်ခုတ် ရွာမှာ ဒေသခံ ၇ ဦး ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုကြားရကြောင်း မနေ့က မနက်မှာလည်း ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတင်း ကြားရကြောင်း ပြောပါတယ်။
တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကတော့ သစ်ပုတ်တောင်ကျေးရွာ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းကို အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ တပ်မတော်ကို မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ပြီး ရွာထဲဝင်ပြေးသွား တာတွေရှိရင်တော့ တပ်မတော်က စစ်ဆေးတာတွေ ရှိနိုင်ကြောင်း ဒါပေမယ့် တပ်မတော်က ရွာကိုမီးရှို့မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုတယ်ဆိုတာက ရွာသားအမည်ခံပြီး AA အမာခံတွေက စွပ်စွဲပြောဆိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/new s/minbya-rakhine-villagers-06102020195217.html
လူနာအမှတ်စဉ် ၂၄၉ နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည့် မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်တွင် စာစစ်ရန်ရောက်ရှိနေသည့် ဆရာနှင့်တစ်ဆောင်တည်း အတူနေသည့်ဆရာ ၅၆ ဦးကိုလည်း အသွားအလာကန့်သတ်မှု ပြုလုပ်ထားကြောင်း မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ အောင်ဝင်းထံမှ သိရသည်။“ခုလောလောဆယ်တော့ အဲဆရာ ၅၆ ဦး ကိုအသွားလာ ကန့်သတ်ထားတယ်။ ထမင်းကျွေးတဲ့အစီစဉ်တွေ ကျောင်းကဘဲဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်။ အစောင့်အရှောက်တွေနဲ့ထားတဲ့ Quarantine မဟုတ် ဘူး။ လတ်တစ်ပျက်ဖြစ်သွားတဲ့ အပူချိန် တိုင်းပေးဖို့တွက်ကျတော့ စာစစ်တဲ့ချိန်မှာကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်ပေးတဲ့ ဆရာမ ၂ ဦးရှိတယ်။ အဲဆရာမ ၂ ဦးကနေပြီး မနက်တိုင်းသွားပြီး အပူချိန်တိုင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။
ကျန်းမာရေးဌာနကလည်း ဆရာမ တစ်ဦးလာမယ်။”ဟု မြစ်ကြီးနား တက္ကသိုလ်ပါမေက္ခချုပ် ဒေါက်တာအောင်ဝင်းက ဆို သည်။ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်တွင် စာစစ်ရန်တွက် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့မှစကာ ဆရာ၊ဆရာမစုစုပေါင်း ၁၄၅၂ ဦးရှိကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ ပိုးတွေ့လူနာအမှတ် ၂၄၉ သည် မိုးမောက်မြို့ မုန်းခမ်းကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲမှ သားဖွား ဆရာမ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ခရီးသွားရာဇဝင်အရ မေလ ၂၈ ရက်မှ ၃၁ ရက်နေ့ထိ အဆိုပါကျောင်းဆရာ၏ နေအိမ်တွင် တည်းခိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
“Case-249 ရဲ့နှာခေါင်းတို့ဖတ်၊ အာခေါင်တို့ဖတ်ကို ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့က ပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဆေးစစ်ချက်အဖြေကတော့ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာထွက်တယ်။ သိသိချင်းဘဲ Contant တွေယူပြီး မြစ်ကြီးနားမှာစာစစ်ဖို့ရောက်ရှိ နေတဲ့ဆရာဖြစ်နေတဲ့ တွက်မနေ့ကစပြီး ဆေးရုံပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်။”ဟု ကချင်ပြည်နယ် Covid-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မတီမှ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင့်နိုင် ကပြောသည်။ ဗန်းမော်မှ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်တွင်ရောက်ရှိလာသည့် စာစစ် ဆရာ၏ ခရီးသွားရာဇဝင်သည် ဇွန် ၂ ရက်နေ့တွင် ရွှေကူ မိုးစိပ်ရွာသို့သွားခဲ့ပြီး ၃ရက်နေ့တွင် ရွှေကူမှမြစ်ကြီးနားသို့ တိုက်ရိုက်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မြစ်ကြီးနားဂျိန်းဖေါ့ဧရာကားဖြင့် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းနဲ့တူ ကျောင်း ဆရာ ၂ ဦးအပါအဝင် တပ်မတော်သားတစ်ဦးလည်းပါဝင်ကာ လက်ရှိချိန်တွင်ယင်းကျောင်းဆရာ ၂ ဦးအပါအဝင် တပ်မတော်သားတစ်ဦး စုစုပေါင်း ၃ ဦးကို F.Q ထားရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
ပိုးတွေ့လူနာနှင့်ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သည့် ကျောင်းဆရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ဖုန်း ဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ပိုးတွေ့လူနာအမှတ်စဉ် ၂၄၉ သည် မိုးမောက် ဆေးရုံ၊ စာစစ်ဆရာ၏ နေအိမ်၊ ဇာဘော်လီဆိုင်၊ လွယ်ဂျယ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်နေရာများ၊ သူနာပြုနဲ့ ပတ်သက် သောနေအိမ်များအပြင် နေရာစုစုပေါင်း ၁၆ ခုတွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ဦးတင့်နိုင်ထံမှ သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ် တွင် လွယ်ဂျယ်ဂိတ်မှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ထိ ၁ သောင်းကျော်ရှိပြီဖြစ်သည်။ https://burmes e.kachinnews.com/2020/06/12 /%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ် နမ့်လပ်ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်ပတ်ကျေးရွာ ဒေသခံ လင်မယား ၂ ဦး အဆိပ်သင့်မှို စားသုံးကာ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးသွားသည့် လင်မယား ၂ ဦးသည် ဇွန် ၆ ရက် တွင်တောင်ယာသို့သွားအလုပ်လုပ်ရင်း မှိုများရလာခဲ့ရာ အဆိုပါမှိုများကိုစားသုံးကြပြီးနောက် သေဆုံးသွားကြကြောင်း နမ့်ပတ်ကျေးရွာ ဒေသခံ စိုင်းစွမ် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။ ထို အဆိပ်ရှိသည့် မှိုကို စားသုံးပြီးနောက် လင်ယောက်ကျားဖြစ်သူသည် ဇွန် ၈ ရက် မနက်ပိုင်းတွင် သေဆုံးခဲ့ ပြီး၊ ဇနီးဖြစ်သူသည် ဇွန် ၉ ရက် ည ၈ နာရီဝန်းကျင်တွင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း စိုင်းစွမ် က ပြောသည်။ “ အဆိပ်ရှိ တဲ့မှိုစားပြီး သေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ လင်မယား ၂ ယောက်လုံးက ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ပဲ။ ဒီကသူတွေက မှိုဆိုတာ အဆိပ်ရှိမရှိ မသိဘူး။ စားကြတာပဲ” ဟု စိုင်းစွမ် က ဆိုသည်။
တန့်ယန်းမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူများစုသည် တောင်ယာသွားကာ တောထဲတွင် ဟင်းရွက်များ ရှာဖွေပြီးစားသုံးလေ့ရှိ ကြကြောင်း၊ ယခု ရာသီတွင် မှိုများစွာပေါက်သဖြင့် မှိုများတွင် အဆိပ်ရှိသည့်မှို၊ အဆိပ်မရှိသည့် မှိုကို မသိရှိဘဲ ခူးလာကာ ချက်စားကြလေ့ရှိသည် ဟု စိုင်းစွမ် က ပြောပြသည်။ “ သေဆုံးသူ တွေမှာ တော့ကလေးကျန်ခဲ့တယ်။ ကလေးကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး”ဟုလည်း စိုင်းစွမ် က ထပ်လောင်းပြောသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုရာသီတွင် ဒေသခံ တောင်သူများကို တောထဲတွင် တွေ့သမျှမှိုများ မခူးစားရန် ပညာပေးသင့်ကြောင်း၊ မှိုစားသုံးပါက အဆိပ်ရှိ၊ မရှိ သိရှိရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း တန့်ယန်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့သူအများစုက အခြေခံ လူတန်းစားတွေများတယ်။ သူတို့တွေက မှိုမြင်တာနဲ့ စားလို့ရတဲ့ မှိုပဲထင်ကြ တယ်။ မစားခင်မှာ မှိုဆိပ်ရှိ၊မရှိ သိအောင်လုပ်သင့်တယ်”ဟု တန့်ယန်းဒေသခံ တဦးဖြစ်သည့် စိုင်းယီ က ပြောသည်။ အဆိပ်ရှိသည်ဟု ယူဆရသည့် မှိုများမှာ- ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသည့်မှိုများ၊ အညိုရောင်မှိုသေးသေးမွှားမွှားများ၊ အညိုရောင် မှိုပွင့်ကြီးများ၊ အနီရောင်၊ ပန်းရောင် အဆင်းရှိသည့် မှိုများ၊ မှိုပွင့်ကို လက်နှင့် ခြွပေတ်သည့် အခါ အနီရောင် အရည်ထွက် ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အဆိပ်ရှိသည့် မှိုများကို စားသုံးမိပါက ခံစားရသည့် ရောဂါလက္ခဏာများမှာ မူးဝေခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန် ကျခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ သတိလစ်မေ့မျောခြင်းနှင့် တက်ခြင်း များဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ မှိုဆိပ်သင့်ခြင်းကြောင့် သာမာန်ရောဂါ လက္ခဏာများမှ အသက်သေဆုံးသည့် အထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/17062
၁။ သီပေါမွို့နယျအတှငျး အစိုးရတပျနှငျ့ RCSS/SSA တိုကျပှဲဖွဈ
၂။ ဂြျောမဆပျစဈရှောငျစခနျးတှငျ အထိမျးအမှတျကြောကျတိုငျစိုကျထူ
၃။ ၅ လ ကြျောအတှငျး ပလကျဝတှငျ တိုကျပှဲကွောငျ့ အရပျသားသဆေုံးမှု ၄၀ ဦးထိရှိ
၄။ KNU နှငျ့ ကရငျပါတီမြား ငွိမျးခမျြးရေး ဖွဈစဉျနှငျ့ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျညှိနှိုငျးမှုပွုလုပျခဲ့
၅။ ခိုလမျ တောငျသူ ၄၇ ဦး ကို တပျမှ တရားစှဲဆိုထား
၆။ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီမှ ရှေးကောကျပှဲဝငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအား ရှေးခယျြမညျ
၇။ မှနျပွညျနယျတှငျ တပျမဲရုံအပါအဝငျ မဲရုံပေါငျး ၉၅၈ ရုံလြာထား
၈။ ပလကျဝမွို့နယျ နနျးခြောငျးဝကြေးရှာသားတဈဦး အမညျမသိလကျနကျကိုငျတဈစုမှ ပဈသတျခံရ
၉။ တိုကျပှဲရပျတနျ့ပွီး စဈရှောငျမြားနရေပျပွနျနိုငျရေးလုပျဆောငျပေးရနျ ကခငျြအဖှဲ့မြားတောငျးဆို
၁၀။ ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (CNLD) မှ ရှေးကောကျပှဲဝငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို ဇူလိုငျလကုနျ တှငျ အပွီးကွညောမညျ
၁၁။ RCSS/SSA ရရှိလာသညျ့ ထောကျပံ့ရေး ပစ်စညျးကို ခကျခဲသညျ့ နရောပွနျခှဲမညျ
၁၂။ ကိုဗဈကွောငျ့ ၂၁ ရာစုပငျလုံ ညီလာခံကို အကဉျြးခြုံးကငျြးပမညျ
၁၃။ ပူတာအို စဈရှောငျမြားကို နရောအသဈတှငျပွနျလညျနရောခထြားရနျ KHCC စီစဉျ
၁၄။ စဈတှမွေို့နယျတှငျ တပျမတျောရယောဉျမှ ပဈခတျမှုကွောငျ့ ၁ ဦး သဆေုံး၊ ၄ ဦး ဒဏျရာရ
၁၅။ မှတျပုံတငျမရှိသေးသညျ့ ကရငျလူဦးရေ ၊ မှနျပွညျနယျတှငျ ၅၀,ဝ၀ဝ ကြျောရှိနိုငျကွောငျး ကရငျရေးရာဝနျကွီး ပွော
၁၆။ မှတျပုံတငျ မရှိသညျ့ ကရငျနီ ဒုက်ခသညျမြား မဲပေးရနျ ဆန်ဒရှိ
၁၇။ ပွိုကသြညျ့ ပငျလောငျး ဟျောနနျး ပွနျလညျထိနျးသိမျးမညျ
၁၈။ ပုဏ်ဏားကြှနျးတှငျ AA က တပျအရာရှိ ၁ ဦးကို သတျပွီး ၁ ဦး ဖမျးဆီးသှား
၁၉။ မွဝတီရဲစခနျးရှေ့ ပေါကျကှဲမှုမှာ ဗုံးသီးဟောငျးအား ခြိနျကိုကျမိုငျးပုံစံပွုလုပျ၍ ဖောကျခှဲခဲ့ဟု ဆို
၂၀။ လားရှိုးဘကျမှလာသညျ့ အထောကျအထားမဲ့ တရုတျနိုငျငံသား ၈ ဦး မွဝတီတှငျ ဖမျးမိ
၂၁။ မငျးပွား၊ သဈပုတျတောငျရှာအနီး တိုကျပှဲကွောငျ့ ဒသေခံ ခွောကျထောငျနီးပါး ထှကျပွေးနရေ
၂၂။ ပိုးတှအေ့မှတျစဉျ ၂၄၉ နှငျ့ထိတှသေူ့ စာစဈဆရာနှငျ့အဆောငျတူ ဆရာ ၅၉ ဦးကို အသှားအလာကနျ့သတျထား
၂၃။ တနျ့ယနျးမွို့နယျ အတှငျး အဆိပျရှိမှိုစားမိ လငျမယား ၂ ဦးသေ
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး သီပေါမွို့နယျအတှငျး အစိုးရတပျမတျောနှငျ့ သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ( RCSS/SSA) တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
ဇှနျလ ၁၀ ရကျ ညနေ ၅ နာရီ ဝနျးကငျြက သီပေါအခွစေိုကျ ခွမွေနျတပျရငျး ခမရ ၃၂၆ နှငျ့ တိုကျပှဲ ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး အဆိုပါတိုကျပှဲမှ အစိုးရတပျမတျောအရာရှိ ၂ ဦး ကဆြုံးကာ၊ ၂ ဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး စဈမွပွေငျ သတငျးအရ သိရသညျ။“ အစိုးရ တပျဘကျကတော့ အရာရှိ ဗိုလျ ၂ ဦး၊ ၂ ပှငျ့နဲ့ က သဆေုံးတယျ။ ၂ ဦးကတော့ ဒဏျရာရတယျ” ဟု ဒသေတှငျး အမညျမဖျောလိုသညျ့ အရာရှိတဦးက ပွောပွသညျ။ သို့သျာ ၎င်းငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး အသေးစိတျကိုမသိရှိရသေးကွောငျး ဒုဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး က ပွောသကဲ့သို့ RCSS/SSA ၏ သတငျး ဝကျပျဆိုဒျ ဖွဈသညျ့ Tai Freedom တှငျလညျး ဖျောပွ ထားခွငျးမရှိခဲ့ပေ။
အစိုးရတပျမတျောက သီပေါမွို့နယျ ပနျခုတျ ပနျခမျးရှာဘကျသှားမညျဟု အကွောငျးကွားသညျ့အပျေါ RCSS/SSA က ကားလမျးအတိုငျးသာ သှားရနျ၊ တောလမျးဘကျမသှားရနျ အကွောငျးပွနျခဲ့ကွောငျး RCSS/SSA ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုတိယ ဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။“ တောထဲမှာ ကနြျောတို့စဈကွောငျးရှိမှာမို့ ထိတှမှေု့ဖွဈနိုငျ တယျ။ အဲတာကို သူတို့က လမျးအတိုငျးမသှားဘဲ တောထဲကိုသှားတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့ တပျသားတှနေဲ့ ထိတှမှေု့ ဖွဈခဲ့ကွတာပါ”ဟု ဒုဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး က ဆိုသညျ။ တိုကျပှဲသညျ ညနေ ၅ နာရီ မှ ညနေ ၆ နာရီထိ ကွာခဲ့သညျဟု ဆိုပါသညျ။
လှနျခဲ့သညျ့ ရကျသတ်တပတျကလညျး သြှမျးပွညျအရှပေို့ငျး ပုံပါကငျြမွို့နယျတှငျ အစိုးရတပျမတျောနှငျ့ RCSS/SSA တို့ တိုကျ ပှဲဖွဈပှားခဲ့သေးသညျ။“ အခုဖွဈတဲ့ တိုကျပှဲတှကေ အထကျကစီမံခကျြရှိရှိနဲ့ ထိုးစဈဆငျတာ မဟုတျလောကျဘူး။ အောကျ ခွကေ အပျေါရဲ့စညျးကမျးခကျြကို လိုကျနာမှုမရှိတာလားပေါ့။ အထကျကတောငျ သိခငျြမှသိမယျ”ဟု ဒုဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး က ပွောသညျ။ “ ကနြျောတို့ အောကျခွမှောဖွဈနတေဲ့ ပွဿနာတှေ မဖွရှေငျးရငျတော့ ပွဿနာ ကွီးလာနိုငျပါ တယျ။ ပွဿနာ မကွီးအောငျတော့ ကနြျောတို့ အဖကျဖကျ ညှိနှိုငျးဖို့ပဲရှိပါတယျ” ဟု ဒုဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး က ပွောဆို လိုကျသညျ။ https://burmese. shannews.org/archives/17055
ကခငျြဒသေတဈကြော့ပွနျစဈပှဲ ၉ နှဈပွညျ့နတှေ့ငျ Kachin Youth Movement အဖှဲ့ကဦးဆောငျပွီး မွဈကွီးနားမွို့ ဂြျောမဆပျ စဈရှောငျစခနျးတှငျ အထိမျးအမှတျကြောကျတိုငျ စိုကျထူခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ “ANHTE GALOI N MALAP NA GA AI” (ကြှနိုပျတို့ဘယျတော့မှမမပေ့ါ) အဓိပ်ပာယျရသညျ့ စာတမျးပါကြောကျတိုငျကို စခနျး ၃ ခုတှငျ စိုကျထူသှားရနျ ကနဦး စီစဉျခဲ့သျောလညျး နရောအခကျအခဲကွောငျ့ စခနျး ၁ ခုတှငျသာပွုလုပျနိုငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
“ဒီလုပျငနျးလုပျဖို့ လူငယျတှကေို ဘယျသူမှ တိုကျတှနျးပေးတာမရှိဘူး။ အခုဆိုရငျစဈရှောငျလာတဲ့ ကာလကအရမျးကွာလာ ပွီဖွဈတယျ။ နောငျတခြိနျမှာ မြိုးဆကျသဈတှေ သိမွငျဖို့။ အမွဲတမျးသတိရနဖေို့ ရညျရှယျပွီး လုပျတာပေါ့လေ။ ကြောကျတိုငျ စိုကျထူတဲ့နရောမှာလညျး ၃ နရောမှာ လုပျဖို့စီစဉျထားတာဖွဈတယျ။”ဟု အစီစဉျအကောငျထညျဖျောခဲ့သညျ့ ကခငျြလူငယျ အဖှဲ့မှ ကိုပေါလု က ပွောသညျ။ ဂြျောမဆပျစဈရှောငျစခနျးတှငျ စိုကျထူထားသညျ့ ကြောကျတိုငျအတှကျ ဆုတောငျးပှဲ အခမျး အနားကို ကခငျြတဈကြော့ပွနျ တိုကျပှဲ ၉ နှဈပွညျ့သညျ့ ဇှနျလ ၉ ရကျနေ့ ညနပေိုငျး ၃ နာရီ အခြိနျတှငျပွုလုပျခဲ့သညျ။
စဈရှောငျမြားနထေိုငျသညျ့စခနျးတှငျ အထိမျးအမှတျကြောကျတိုငျစိုကျထူသညျ့လှုပျရှားမှုသညျ စဈရှောငျပွညျသူမြားအတှကျ ကောငျးမှနျသညျ့ လုပျရပျတဈခုဖွဈကွောငျး ဂြောမဆပျ စဈရှောငျ ဒုတာဝနျခံ ဒျေါဘောမျမြှျောက ယခုလိုပွောဆိုသညျ။ “အခု လို စဈရှောငျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး လှုပျရှားမှုဟာ အငျမတနျမှကောငျးမှနျတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အရငျတုနျးက ကမြတို့ လူမြိုးတှဟော နရောတကာ နထေိုငျခဲ့ကွတာဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာအမှတျအသားတှမှေ မရှိခဲ့ဘူ။ အဲ့ကွောငျ့ အခု စဈရှောငျတှေ နထေိုငျခဲ့တဲ့နရောတှကေို အခုလို အမှတျအသား မှတျတိုငျပွုလုပျထားက အရမျးကို ထောကျခံတယျ။ ဒီနရော မှာ စဈရှောငျတှကေ ခကျခကျခဲခဲနထေိုငျခဲ့တာကို တရားဝငျမှတျတမျးတငျထားတာ ဖွဈတယျ။ ဒီထကျကောငျးမှနျတဲ့ လှုပျရှား မှုတှလေညျး ဆကျလုပျပေးစခေငျြတယျ” ဟု ပွောသညျ။
မွဈကွီးနားမွို့ ဂြျောမဆပျစဈရှောငျစခနျးသညျ ၂၀၁၈ ခုနှဈနှရောသီတှငျ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA တပျမဟာ ၂ တပျရငျး ၁၄ နယျမွကေို မွနျမာ့တပျမတျောက ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခြိနျ စဈရှောငျအဖွဈထှကျပွေးလာသူမြားဖွဈသညျ။ လယျကုနျး ဗကျလငျစဈရှောငျနှငျ့ ဂနျြမိုငျကောငျ (RC) စဈရှောငျစခနျးမြားတှငျ ကြောကျတိုငျစိုကျထူရနျစီစဉျခဲ့သျောလညျး မွနေရောအခကျအခဲကွောငျ့ ယခုနှဈတှငျ စိုကျထူနိုငျခွငျးမရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ကခငျြတဈကြော့ပွနျတိုကျပှဲကွောငျ့ ကခငျြပွညျနယျနှငျ့ ရှမျးမွောကျဒသေတှငျ ကခငျြစဈရှောငျ ၁သိနျးကြျောရှိနဆေဲဖွဈပွီး အမြားစုမှာ နရေပျပွနျလိုကွောငျး ပွောဆိုနကွေပါသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/10/%e1%80%82%e1%80%bb%e%80% b1%e1%80%ac%e1
ပလကျဝမွို့နယျတှငျ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျမတျောတို့ကွား တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈဇနျဝါရီလမှ ဇှနျလ ၅ ရကျနကွေ့ား ၅ လ ကြျောအတှငျး အရပျသား ၄၀ ဦးထိ သဆေုံးပွီဖွဈကွောငျး Chin IDP Support Committee ဖျောပွ ခကျြအရ သိရှိရသညျ။
CISC ဖျောပွခကျြအရ ၂၀၂ဝ ခုနှဈ ဇနဝါရီလမှ ဇှနျလ ၅ ရကျနကွေ့ား တိုကျပှဲမြားကွောငျး အရပျသား သဆေုံးမှုမှာ ၄၀ ဦး အထိ ရှိခဲ့ပွီး သဆေုံးသူ အမြားစုမှာ ပလကျဝမွို့နယျရှိ မိတျစာရှာ၊ ဝကျမရှာ၊ နနျးခြောငျးဝရှာ၊ မွို့မ၊ ရှာမ၊ မငျတာရှာ၊ ပွိုငျ တိနျရှာ၊ ကွကျဥဝရှာ၊ ပ်ပီဝုနျးရှာနှငျ့ ဆီးဖလောငျးရှာနေ ဒသေခံနေ ပွညျသူမြားဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ သဆေုံးသူ အမြားစု မှာ ဗုံးကွဲရာမှ သဆေုံးသူ၊ လကျနကျကွီးထိမှနျ၍ သဆေုံးသူ အမြားဆုံးဖွဈပွီး အခြို့မှာမညျသညျ့ လကျနကျထိ မှနျသညျ မသိရဘဲ သဆေုံးမှုမြားပါ ပါရှိနကွေောငျး CISC ဖျောပွခကျြအရ သိရသညျ။
၂၀၂ဝ ခုနှဈနောကျပိုငျးတှငျ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျမတျောတို့ကွား တိုကျပှဲမြားပွငျးထနျလာမှုကွောငျ့ ပလကျဝမွို့ တှငျ တိုကျပှဲရှောငျသညျ့ အိမျထောငျစု ၁၁၃၂ စုရှိပွီး လူဦးရအေားဖွငျ့ ၅၀၉ဝ ဦး ရှိကွောငျး နှငျ့ ဆမီးမွို့တှငျ အိမျထောငျစု ၆၉၈ စုရှိပွီး လူဦးရအေားဖွငျ့ ၂၉၆၁ ဦး ရှိကွောငျး ပွညျသူမြား အရေးပျေါကူညီရေးနှငျ့ ပွနျလညျထူထောငျရေးကျောမတီ RRCCI ၏ ထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73361
၄။ KNU နှငျ့ ကရငျပါတီမြား ငွိမျးခမျြးရေး ဖွဈစဉျ နှငျ့ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျညှိနှိုငျး မှုပွုလုပျခဲ့
KNU- ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး ဗဟိုခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့ ကရငျနိုငျငံပါတီခေါငျးဆောငျမြား၊ ကရငျလူငယျ မြားပါဝငျ၍ ရှဆေ့ကျငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျနှငျ့ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျညှိ နှိုငျးသညျ့ အှနျလိုငျး (Online Meeting) အစညျးအဝေးတဈခု ယမနျနေ့ ဇှနျလ ၉ ရကျနတှေ့ငျ ပွုလုပျခဲ့သညျ။
လတျတလော ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျ၏ နောကျဆုံးအခွအေနမြေား၊ စိနျချေါမှုမြားကို နှီးနှောဖလှယျခဲ့ကွပွီး နိုငျငံရေးပါတီ ၏ အခနျးကဏ်ဍမြားနှငျ့ လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျသှားနိုငျသညျ့ လုပျငနျးစဉျမြားကို အဓိက ဆှေးနှေးခဲ့ ကွကွောငျး KNU အတှငျးရေးမှူး (၂) ပဒိုစောလှထှနျးက ပွောသညျ။ “ငွိမျးခမျြးရေး ဖျောဆောငျမှုအရ ၂၀၂၀ အလှနျ တကျ လာမယျ့ အစိုးရအတှကျ ငွိမျးခမျြးရေး ဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျ ပွီးတော့မှ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးပှဲနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ အာမခံ ခကျြရှိဖို့အတှကျ ပွုလုပျကငျြးပမဲ့ UPC ( ပွညျ ထောငျစုညီလာခံ) အခငျးအကငျြးနဲ့ UPC က ကငျြးပဖို့ လိုအပျမလိုအပျ၊ UPC ကိုလညျး ရှေးကောကျပှဲ Camp aign မတိုငျခငျ အစိုးရက ပေးပို့လားတဲ့ ဇူလိုငျလမှာကငျြးပနိုငျဖို့အတှကျ ကငျြပရငျ ဘယျလို အခငျးအကငျြး၊ ကငျြးပမယျဆိုလညျး ဆှေးနှေးမဲ့ကိစ်စတှေ အဲ့ဒါတှကေို update လုပျကွတာပေါ့”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွော သညျ။
ထို့အပွငျ နိုငျငံရေး ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားကို လှတျတျောတှငျး လှတျတျောပွငျပ ဟနျခကျြညီညီ သှားနိုငျရေး အတှကျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးနိုငျမညျ့ အခွအေနအေပျေါမူတညျပွီး လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ နိုငျငံရေးပါတီမြား၏ ပွငျဆငျထားရမညျ့ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ကရငျလူငယျမြား၏ ပါဝငျရမညျ့ အခနျးကဏ်ဍမြားကို ဆကျလကျဆှေးနှေးသှားကွမညျဟု ၎င်းငျးအစညျးအဝေး၌ သဘောထားမြားရှိခဲ့ကွောငျး ပဒိုစောလှထှနျးက ဆကျ ပွောသညျ။
သို့သျော ရှေးကောကျပှဲမတိုငျခငျနှငျ့ ရှေးကောကျပှဲအလှနျငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ ဆကျလကျဆှေးနှေးသှားနိုငျရေး အတှကျ ငွိမျးခမျြးရေး ဖွဈစဉျတှငျ ပါဝငျသညျ့ အစိုးရ၊ တပျမတျောအစုအဖှဲ့မြားနှငျ့ အပဈရပျ တိုငျးရငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့ အစညျးမြားမှ Online အစညျးအဝေးမြားဖွငျ့ ဆကျလကျဆှေးနှေး ညှိနှိုငျးမှုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ။ အလားတူ အစိုးရမှ ပွညျ ထောငျစုငွိမျးခမျြးရေး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပငျလုံ စတုတ်ထအကွိမျမွောကျ အစညျးအဝေးကို လာမညျ့ ဇူလိုငျလအတှငျး ကငျြးပ လိုကွောငျး ပွီးခဲ့သညျ့ မလေကုနျတှငျ အပဈရပျ EAO အဖှဲ့အစညျးမြားသို့ တရားဝငျ အဆိုပွုထားသလို ပွညျထောငျစု သဘောတူစာခြုပျ အစိတျအပိုငျး (၃)တှငျ ထညျ့သှငျးခြုပျဆိုမညျ့ အခကျြမြား၊ ညီလာခံကငျြးပမညျ့ အခငျးအကငျြး ပုံစံ မြားကိုပါ အစိုးရဘကျမှ အဆိုပွုထားသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/knu%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80 %84%e1%80%b7%e1%80%b9
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး လှိုငျလငျခရိုငျ နမျ့စနျမွို့နယျ ရလခတိုငျးရုံးစိုကျရာ ခိုလမျမွို့နယျခှဲရှိ အမှတျ ၆၆ ခွလေငျြတပျရငျးမှ တောငျသူ ၄၇ ဦး ကို တရားစှဲဆို ထားကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
အမှတျ ၆၆ ခွလေငျြတပျရငျးသညျ တောငျသူ ၆၄ ဦး ပိုငျဆိုငျထားသညျ့ မွဧေက (၁၃၅၃.၃၃ )ဧက ကို သိမျးဆညျးခဲ့ပွီး ဇှနျ ၉ ရကျနကေ့ တောငျသူ ၄၇ ဦးကို နမျ့စနျမွို့နယျ တရားရုံးမှာ တရားဆိုထားသညျ။“ တပျသိမျးမွတှေကေို ပိုငျတာက တောငျသူ ၆၄ ဦးပါ။ တရားစှဲဆိုခံရတာက ၄၇ ဦးရှိပါတယျ”ဟု မွသေိမျးခံရသညျ့ တောငျသူ ဦးလှထှနျးက သြှမျးသံတျော ဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ အဆိုပါ မွပေျေါတှငျ တောငျသူမြား နှဈပေါငျး ၄၀ ကြျော စိုကျပြိုးလုပျကိုငျလာခဲ့ပွီး၊ ၂၀၁၉ ခုနဈ ၈ လ ပိုငျးတှငျမူ တပျပိုငျမွဖွေဈကွောငျး ကနဦးပိုငျရှငျမှ လကျမှတျရေးထိုးပေးရနျအတှကျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးရုံးမှတဆငျ့ အစညျးအဝေးချေါယူခဲ့ကွောငျး ဦးလှထှနျး က ပွောပွသညျ။ “တပျမွကေိုကြူးကြျောစိုကျနတေယျလို့ပွောတယျ။ လကျမှတျ ထိုးပေးပေါ့။ လောဆယျ လုပျစားလို့ရသေးတယျ။ နောကျနိုငျငံတျောက လုပျစရာရှိရငျဖယျခိုငျးမယျ။ ကနြျောတို့ တယောကျမှ လကျမှတျမထိုးသေးဘူး” ဟု ဦးလှထှနျးက ဆိုသညျ။
တပျမှ တောငျသူမြားကို ၄ ကွိမျတိုငျတိုငျတှဆေုံ့ပွီး လကျမှတျထိုးခိုငျးသျောလညျး တောငျသူမြားက လကျမှတျမထိုးပေးခဲ့ ကွောငျး၊ အစညျးအဝေးချေါယူရာတှငျလညျး တကွိမျနှငျ့တကွိမျ အစညျးအဝေးလာတကျသူမြားမတူကွကွောငျး၊ နောကျဆုံး ချေါယူသညျ့ ၄ ကွိမျမွောကျ အစညျးအဝေးလာတကျသညျ့ တောငျသူ ၄၇ ဦးကို တပျက ပုဒျမ ၄၄၇ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ တရားစှဲဆို လိုကျကွောငျး သိရသညျ။
တပျသိမျးမွပေျေါတှငျ တောငျသူမြားနစေ့ဉျ စိုကျပြိုးရေးလုပျနရော ထိုသို့တပျမှလာရောကျ ဟနျ့တားသညျ့အပျေါ လကျရှိ တောငျသူမြားအတှကျ အခကျအခဲမြားစှာ ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေကွောငျးလညျး မွယောသိမျးဆညျးခံရသညျ့ တောငျသူမြားက ပွောဆိုလိုကျသညျ။“ ကနြျောတို့ ရှနေ့ရှောပွီး အမှုရငျဆိုငျသှားမယျ”ဟု အမညျမဖျောလိုသညျ့ တောငျသူတဦးကပွော သညျ။ ခိုလမျမွို့နယျရှိ တောငျသူ ၄၇ ဦးကို တပျမှ တရားစှဲဆိုသညျ့ ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး သြှမျးသံတျောဆငျ့မှ ခိုလမျမွို့ နယျခှဲရှိ အုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့ တပျကို ကွိုးစားဆကျသှယျခဲ့သျောလညျး မရရှိခဲ့ပေ။ အစိုးရတပျ မွယောသိမျးမှုသညျ ယခု ရကျပိုငျး သြှမျးတောငျပိုငျးသာမက သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျးတှငျလညျး သိမျးဆညျးမှုမြားရှိနသေဖွငျ့ သြှမျးပွညျသူမြားလညျး စိုးရိမျပူပနျမှုဖွဈပှားနသေညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17043
ကရငျပွညျနယျအခွစေိုကျ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ(KNDP)က လာမညျ့ ၂၀၂၀ ပါတီစုံအထှထှေရှေေးကောကျ ပှဲတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး စိစဈရှေးခယျြမှုမြားကို ပွုလုပျသှားရနျစီစဉျနပွေီဟု သိရသညျ။
အဆိုပါ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို စိစဈရှေးခယျြနိုငျရေးအတှကျ ယခုဇှနျလ ၄ ရကျနကေ့ ဖားအံမွို့၊ တျောဝငျရတနာ ဟိုတယျတှငျပွုလုပျသော ပါတီလစဉျအစညျးအဝေးအပွီး ကိုယျစားလှယျလောငျးရှေးခယျြရေးကျောမရှငျ ဖှဲ့စညျးထားပွီဖွဈ ကွောငျး KNDP ဥက်ကဋ်ဌ မနျးအောငျပွညျစိုးက ကအေိုငျစီသို့ ယခုလိုပွောသညျ။“၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဝငျမယျ့ ကိုယျစား လှယျလောငျးမြားကို ရှေးခယျြရေးကျောမရှငျဖှဲ့လိုကျတယျ။ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ရောဂါ(COVID-19)ရဲ့ အခွအေနေ အရ ရှေးကောကျပှဲကို ဘယျနေ့၊ ဘယျရကျလုပျမလဲ ဆိုတာလညျး တရားဝငျမကွငွောသေးဘူးလေ။ ဒါကွောငျ့ (ပါတီရဲ့ ကိုယျစားလှယျ) ရှေးခယျြရေးအပွီးသတျအခြိနျကတော့ ပွောလို့မရသေးဘူးနျော။”ဟု ၎င်းငျးက ယနေ့(ဇှနျ ၉ ရကျ)တှငျ ပွော သညျ။
ရှေးခယျြရေးကျောမရှငျတှငျ အရှေးမခံသော နာယကအဖှဲ့မြားနှငျ့ အလုပျအမှုဆောငျ အဖှဲ့မြား၊ ပါတီ၏မွို့နယျမြားမှ ၂ ဦး (သို့) ၁ ဦး၊ အရပျဖကျအဖှဲ့(CSO)မှ ၂ ဦး စုစုပေါငျး ၂၁ ဦးဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ အဆိုပါရှေးခယျြရေးကျောမရှငျအဖှဲ့ကို ယခု လ အတှငျး အပွီးသတျဖှဲ့စညျးရနျလြာထားကွောငျး ဥက်ကဋ်ဌ မနျးအောငျပွညျစိုးက ဆကျပွောသညျ။ ကရငျပွညျနယျ အခွေ စိုကျ ကရငျပါတီ ၂ ပါတီဖွဈသညျ့ KNDP နှငျ့ ဖလုံ-စဝျေါဒီမိုကရကျတဈပါတီတို့သညျ ကရငျပွညျနယျတှငျသာ အဓိကထား ယှဉျပွိုငျသှားရနျရှိနကွေောငျး နှဈဖကျပါတီတာဝနျ ရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။
ဖလုံ-စဝျေါပါတီ(PSDP) အနဖွေငျ့လညျး ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအား ရှေးခယျြသှားရနျ ရှိနသေလို မဲဆန်ဒနယျမွေ မထပျ ရေးအတှကျ KNDP နှငျ့ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး ဖလုံ-စဝျေါ ပါတီဥက်ကဋ်ဌ စောခငျမောငျမွငျ့က မလေ ၈ ရကျတှငျ ကအေိုငျစီသို့ ပွောခဲ့သညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1 %80%b9 %e1% 80%a1%e1%
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ မှနျပွညျနယျတှငျ တပျမဲရုံအပါအဝငျ မဲရုံပေါငျး ၉၅၈ ရုံဖှငျ့လှဈရနျ လြာထားသညျဟု မှနျပွညျ နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဦးဟိဏျးလငျးထကျက ပွောသညျ။ ဦးဟိဏျးလငျးထကျက “လကျရှိမှာ မှနျပွညျနယျက မဲဆန်ဒရှငျတှမေဲထညျ့နိုငျဖို့အတှကျ မဲရုံ ၉၅၈ ရုံပေါ့နျော အဲဒီမှာတပျမဲရုံတှလေညျးပါတယျ၊ အခု တပျမိသားစု တပျမဲရုံတှကေအပွငျမှာပဲလုပျမှာပါ၊ အပွငျမှာရပျကြေးနဲ့အတူတူပေါငျးထညျ့နိုငျအောငျ မဲရုံတှလေုပျထားတယျ”ဟုဆိုသညျ။
၂၀၂၀ ခုနှဈ မလေ ၂၉ ရကျနအေ့ထိ ပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ နောကျဆုံးအတညျပွုထားသောစာရငျးအရ မှနျပွညျနယျ ဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၁၇ သိနျး ၄ သောငျးကြျောရှိရာတှငျ တပျမတျောသားမြားနှငျ့ မှီခိုသူတပျမိသားစုဝငျ စာရငျး မြား မပါရှိသေးပေ။“တပျမဲရုံတှကေို တပျရဲ့အပွငျဖကျမှာ ထုတျထားတယျ သို့သျောငွားလညျး အဆောကျအဦးမရှိဘူး ရပျကြေးနဲ့ ပေါငျးတဲ့အခါကရြငျ တဈမိုငျ နှဈမိုငျ သုံးမိုငျ လောကျသှားရမယျ့နရောဆိုရငျ ယာယီမဲရုံတှဆေောကျဖို့ရှိတယျ”ဟု ဦးဟိဏျးလငျးထကျ က ဆကျပွောသညျ။ ထို့ပွငျ ပွညျပမှပွနျလညျရောကျရှိလာသညျ့ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြား မဲပေးခှငျ့ မဆုံးရှုံးစရေနျ မဲစာရငျးတှငျ ပါဝငျမှုရှိမရှိကို ပွနျလညျစိစဈနသေညျဟု မှနျပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ မှ သတငျး ရရှိသညျ။
လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ တဈနိုငျငံလုံးတှငျ မဲရုံပေါငျး ၄ သောငျးကြျောလြာထားသဖွငျ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ နှငျ့ အတူတူလောကျပငျဖွဈသျောလညျး ထောငျဂဏနျးခနျ့ပိုနိုငျသညျဟု ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ တာဝနျရှိသူ တဈဦးက သတငျးထောကျမြားကို ရှငျးလငျးပွောကွားခဲ့သညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ၌ မှနျပွညျနယျတှငျ မဲရုံပေါငျး ၉၁၉ ရုံ၊ တပျတှငျးမဲရုံ ၄၉ ရုံရှိပွီး မဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၁၅ သိနျး ၁ သောငျးကြျော၊ တဈနိုငျငံလုံးတှငျ မဲရုံပေါငျး ၄ သောငျးကြျော ဆန်ဒ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၃၃ သနျးကြျော ရှိခဲ့ကွောငျး သတငျးမှတျတမျးမြားက ဖျောပွသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/ 06/10/%e1%8 1%82 %e1%81%80%e1%81%82%e1%81%80
ခငျြးပွညျနယျ၊ ပလကျဝမွို့နယျ စိမျးစငျးစဈဘေးရှောငျစခနျးမှ နနျးခြောငျးဝကြေးရှာသားတဈဦး နနျးခြောငျးဝကြေးရှာသို့ အသှားလမျးခုလတျတဈနရောတှငျ ဇှနျလ ၁၀ ရကျနေ့ နံနကျ ၉ နာရီဝနျးကငျြ လကျနကျကိုငျတဈစု ပဈခတျခံရပွီး ပှဲခငျြးပွီး သဆေုံးခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
သဆေုံးသူသညျ စိမျးစငျးစဈဘေးရှောငျစခနျးတှငျခိုလှုံနသေညျ့ နနျးခြောငျးဝကြေးရှာသား ဦးမြိုးသနျ့ဖွဈပွီး အသကျ(၄၆)နှဈ ရှိကာ ရှာအသှားသူဌေးကုနျးနှငျ့ လယျလှရှာကွားတှငျပဈသတျခံခဲ့ရကွောငျး ခငျြးနရေပျစှနျ့ခှာတိမျးရှောငျသူမြား အထောကျ အကူပွုကျောမတီမှ အတှငျးရေးမှူး ဦးကြျောအောငျကပွောသညျ။“သူတို့ခိုလှုံတာကတော့ စိမျးစငျးမှာ ဒီမနကျစီးစမျးက နေ သူတို့ (၉)နာရီဝနျးကငျြ သူတို့ထှကျတာဖွဈတယျ၊ ဒီရှာကိုသှားတာပေါ့ ပစ်စညျးတှဘောတှသှေားယူဖို့ သူရှာကိုအဲလို သှား တာ၊ အဲဒီနရောမှာပဈခံရတယျ၊ အဲမှာပှဲခွငျးပဲ ဦးမြိုးသနျ့ကတော့ အဲမှာဆုံးသှားတယျ၊ ကနျြတဲ့လူတှကေတော့ ဘယျလိုမြိုး ဒဏျရာရတာတှရှေိသလဲ၊ ဘယျလိုဖွဈသေးသလဲဆိုတဲ့ဟာ ကနြျောတို့အတညျမပွုနိုငျသေးဘူး၊ သူနဲ့အတူ ကားသမား အပါ အဝငျ (၂၀) ဦးလောကျရှိတယျ” ဟု ဦးကြျောအောငျကပွောသညျ။
နနျးခြောငျးဝ၊ သူဌေးကုနျးနှငျ့ လယျလှရှာတို့သညျ စိမျးစငျးရှာနှငျ့ (၃) မိုငျကြျောလောကျသာကှာဝေးပွီးသညျ့ နရောတှငျ တညျရှိကွသညျ။ သဆေုံးသူ ဦးမြိုးသနျ့မှာ သားသမီးနှဈယောကျနှငျ့ ဇနီးကနျြရဈခဲ့ကွောငျး ၎င်းငျးတို့သှားရာလမျးတှငျ ပဈခတျ သညျ့အဖှဲ့မှာလညျး လကျရှိခြိနျထိ အတညျမပွုနိုငျသေးကွောငျးသိရသညျ။ စိမျးစငျးနှငျ့ နနျးခြောငျးဝ၊ သူဌေးကုနျးနှငျ့ လယျလှရှာတို့ အနီးနားပတျဝနျကငျြတှငျ စဈတပျမှ နရောယူထားပွီး ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) အဖှဲ့လုပျရှားမှုမရှိကွောငျးသိရပွီး သဆေုံးသူဦးမြိုးသနျ့၏ အလောငျးမှာ ပလကျဝမွို့သို့ချေါဆောငျမသှားပဲ စီးစမျးမှာ ပွနျချေါဆောငျသှားနိုငျခရြှေိသညျဟု ဦးကြျောအောငျ က ဆကျပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73408
ကခငျြစဈရှောငျမြား နရေပျပွနျနိုငျရေးအတှကျ နှဈဖကျလကျနကျကိုငျမြားသဘောတူညီမှု တဈစုံတဈခု ရရှိမှသာလြှငျ နရေပျ ပွနျရေးသညျ စိတျခရြမညျဖွဈသညျဟု ကခငျြတိုကျပှဲ ၉ နှဈပွညျ့နတှေ့ငျ ကခငျြအမြိုးသားအတိုငျပငျခံအဖှဲ့က တိုကျတှနျး တောငျးဆိုလိုကျသညျ။ တိုကျပှဲ ၉ နှဈပွညျ့အစီစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး ကခငျြအမြိုးသားအတိုငျပငျခံအဖှဲ့ WMR က ယနေ့ မနကျ သတငျးစာရှငျးလငျး ပှဲပွုလုပျစဉျ WMR အကွံပေး သိက်ခာတျောရဆရာ Rev.Dr. Hkalam Samson က ပွောဆိုခဲ့ ခွငျးဖွဈသညျ။ ‘‘တဈခုခု သဘောတူညီမှုရှိမှသာလြှငျ နရေပျပွနျရေးဟာစိတျခရြမှာဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ Bilateral က စိတျခြ မှု တဈခုအနနှေငျ့ လိုအပျတာဖွဈတဲ့အတှကျ တိုကျတှနျးထားခွငျးဖွဈတယျ။’’ ဟုပွောသညျ။
WMR အဖှဲ့၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ စဈရှောငျမြား ဂုဏျသိက်ခာရှိရှိ လုံခွုံစှာနရေပျပွနျရေး၊ နရေပျမညျ့ဒသေမြားတှငျ သကျဆိုငျ ရာမှ မွမွေုပျမိုငျးရှငျးလငျးပေးရနျနှငျ့ စဈတပျစခနျးမြားကို ဆုတျခှာပေးရေး၊ နရေပျပွနျရေး ဆန်ဒမရှိသော စဈရှောငျမြားအ တှကျ မွလှေတျမွရေိုငျးမြားကို နထေိုငျခှငျ့ရရှိရေးအတှကျ စီစဉျပေးရနျ၊ လကျနကျကိုငျပဠိပက်ခ အဆုံးသတျရေးအတှကျ နိုငျငံ တျောအတိုငျပငျခံနှငျ့ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျတို့ထံ တောငျးဆိုခကျြ စသညျတို့ ပါဝငျသညျကို တှရေ့သညျ။ ထို့အပွငျ ကခငျြ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးပေါငျးစုံပါဝငျသော ပူးပေါငျးလုပျငနျးစဉျအဖှဲ့ Joint Strategy Team ကလညျး ကခငျြနှငျ့ ရှမျးမွောကျ ဒသေ တဈကြော့ပွနျတိုကျပှဲ ၉ နှဈပွညျ့နတှေ့ငျ အခကျြ ၄ ခကျြဖွငျ့တောငျးဆိုခကျြ ထုတျပွနျထားသညျကိုတှရေ့သညျ။ ၎င်းငျး တို့မှာ တဈနိုငျငံလုံးတှငျ စဈပှဲမြားခကျြခငျြးရပျတနျ့ပေးရနျ၊ IDP မြား၏ လူ့အခှငျ့အရေးမြားကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျ ပေး ရနျ၊ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု အကူညီမြားရရှိအောငျ ဆောငျရှကျပေးရနျနှငျ့ လူသားခငျြးစာနာ ထောကျထားမှု လုပျ ငနျးမြားလုပျဆောငျနသေော ဒသေခံအဖှဲ့အစညျးလူပုဂ်ဂိုလျမြားကို လေးစားရနျ စသညျ့အခကျြတို့ဖွဈ သညျ။
မွနျမာပွညျ၏ ပွညျတှငျးစဈပဠိပက်ခသညျ ၁၉၄၇ ပငျလုံစာခြုပျကတိကဝတျ မဖျောဆောငျနိုငျသောကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသော နိုငျငံရေးပွဿနာဖွဈသဖွငျ့ တိုကျပှဲမြားအမွနျရပျတနျ့ကာ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျးဖွငျ့အဖွရှောရနျ ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီ KSPP ကလညျး တောငျးဆိုထားသညျကို တှရေ့သညျ။
ကခငျြစဈရှောငျမြား နရေပျပွနျနိုငျရေးအတှကျ ကခငျြလူသားခငျြးစာနာမှုအဖှဲ့ (KHCC) က လုပျဆောငျနသေလို ရှမျးမွောကျ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA တပျမဟာ ၆ တှငျလညျး ရကျပိုငျးအတှငျး တပျမတျောနှငျ့ KIA ကွား တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ သညျ။ ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO အပါအဝငျ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့နှငျ့ အစိုးရတို့ကွား ငွိမျးခမျြးရေးဆိုငျရာ ဆှေးနှေးပှဲမှာ ယခုနှဈဆနျး တရုတျနိုငျငံ ကူမငျးမွို့တှငျ အလှတျသဘောတှဆေုံ့ခဲ့သညျမှာ နောကျဆုံးဖွဈပွီး Covid-19 ကွောငျ့ တှဆေုံ့မှု ရပျတနျ့နသေညျကိုတှရေ့သညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/06/09/%e180%90% e1%80%ad%e1%80%a f%e1%80%80%e1
ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (CNLD) မှ ရှေးကောကျပှဲဝငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို ဇူလိုငျလကုနျတှငျ အပွီး ကွညောမညျဖွဈကွောငျး CNLD ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးငိုငျဆာချ့ထံမှသိရသညျ။
“ဇှနျလ ၂၇ ရကျနကေို့ နောကျဆုံးထားပွီးတော့ မွို့နယျအသီးသီးမှာ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေ လြှောကျလို့ရတယျ။ ကိုယျကွိုကျတဲ့ ကိုယျနှဈသကျရာ မဲဆန်ဒနယျကိုလြှောကျလို့ရတယျ။ နောကျ ၂၇ ရကျနကေို့ လြှောကျလှာပိတျပွီးတော့ ပဏာမ ရှေးခယျြတဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို ဇူလိုငျလ ၁၁ ရကျနေ့ နောကျဆုံးထားပွီးတော့ရှေးမယျ။
အဲလိုရှေးပွီး တော့ ကြှနျတျောတို့ ဗဟိုကို ဇူလိုငျ လ ၁၉ ရကျထားပွီးတော့ တငျပွရမယျ။ အဲလိုတငျပွပွီးတဲ့နောကျမှာ ဗဟိုကနေ ဇူလိုငျလ ၂၅ ရကျနမှေ့ာ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို အပွီးကွညောမယျ“ဟု CNLD ဥက်ကဋ်ဌ ဦးငိုငျဆာချ့ မှ ပွောသညျ။ ဦးငိုငျဆာချ့ မှ ဆကျပွီး “ဗဟိုခေါငျးဆောငျထဲမှာ လောလောဆယျတော့ မသိသေးပမေယျ့ ဥက်ကဋ်ဌ သုံးယောကျစလုံးကတော့ ပွိုငျမယျ ပေါ့နျော ဒီသုံးယောကျကတော့ မိမိကွိုကျနှဈသကျရာ မဲဆန်ဒနယျကို ရှေးခယျြပိုငျခှငျ့ ရှိတယျပေါ့။ နောကျ ဗဟိုကျောမတီ EC ထဲမှာလညျး ပွိုငျမယျ့သူလညျးရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွိုငျမယျ့သူက လေးပုံတဈပုံလောကျပဲရှိမယျ”ဟု ဆကျပွီးပွောသညျ။
လြှောကျလှာလကျခံရာတှငျ မဲဆန်ဒနယျတဈခုတှငျ နှဈယောကျ သုံးယောကျ ထပျမညျဆိုလြှငျ မွို့နယျကျောမတီမှ ညှိနှိုငျးမညျ ဖွဈပွီး ထပျမံအဆငျမပွပေါက မွို့နယျကျောမတီမှ မဲဖွငျ့ ရှေးခယျြမညျဖွဈပွီး မဲအမြားရရှိသူသညျ ကိုယျစားလှယျလောငျး ဖွဈမညျဖွဈပွီး ဒုတိယမဲ အမြားဆုံးရရှိသူသညျ အရံအဖွဈထားရှိမညျဟုလညျးသိရသညျ။ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျမှ ရှေးကောကျပှဲကိုပုံမှနျကငျြးပသညျ့အတိုငျး နိုဝငျဘာလထဲတှငျ ကငျြးပမညျဟုမီဒီယာမြားထံဖွကွေားထားသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73359
ကိုဗဈ-၁၉ ကာလ ကာကှယျထိနျးခြုပျ ကုသနိုငျရနျအတှကျ သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ/ သြှမျးပွညျတပျ မတျော (RCSS/SSA) ရရှိသညျ့ ပစ်စညျးမြားကို ခကျခဲသညျ့နရောသို့ ပွနျလညျခှဲပေးမညျ ဟု စုံစမျးသိရသညျ။
RCSS/SSA သညျ ယခု ကိုဗဈ-၁၉ ကာလအတှငျး ထောကျပံ့ ပစ်စညျး ၃ ကွိမျ လကျခံရရှိခဲ့သညျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျထိနျး ခြုပျ ကုသနိုငျရနျအတှကျ RCSS/SSA ကို မေ ၂၆ ရကျတှငျ သကျဆိုငျရာ အစိုးရဌာနက တကွိမျ၊ ဇှနျ ၄ ရကျတှငျ အရှေ့ ပိုငျးတိုငျး စဈဌာနခြုပျမှ တကွိမျ နှငျ့ ဇှနျ ၈ ရကျတှငျ သြှမျးပွညျနယျ ပွညျသူလူထု စားနပျရိက်ခာထောကျပံ့ရေးကျောမတီမှ တဈကွိမျ ပေးခဲ့ကွောငျး RCSS/SSA ၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုတိယ ဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွော သညျ။“ ကနြျောတို့ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျထိနျးခြုပျဖို့အတှကျ ထောကျပံ့မှု ရတာ ၃ ကွိမျပါ။ ရလာတဲ့ပစ်စညျးတှကေို လိုအပျ တဲ့ စားနပျရိက်ခာကို အခကျခဲ ကွုံနတေဲ့ နရောမှာ ပွနျပွီး ခှဲဝပေေးမယျ” ဟု ဒုတိယ ဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး က ဆိုသညျ။
ထောကျပံ့ရေး ပစ်စညျးမြားကို RCSS/SSA မှ သကျဆိုငျရာ ကြေးရှာ မွို့နယျတိုငျးတှငျ ဖှဲ့ထားသညျ့ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျရေး ကျောမတီလကျထဲ အရောကျပို့ပေးသှားမညျဟုလညျး ဒုဗိုလျမှူးကွီးစဝျအုမျခေး က ပွောသညျ။ “အစိုးရဌာနနဲ့ စဈတပျ နှဈဖှဲ့ ပေါငျးရငျ ထောကျပံ့ပစ်စညျး ၁၀ မြိုးကြျောတယျ။ တဈနရောကို four wheels ကား ၂ စီး လောကျရှိတယျ။ စားနပျရိက်ခာ ဘကျကတော့ ဆနျ ၂၄ ပွညျအိတျ က အိတျပေါငျး ၃၀ဝ နဲ့ ဆီ ၁၀ ပိဿာပုံးက ပုံး ၃၀ လကျခံရရှိခဲ့တယျ” ဟု RCSS/SSA ပွောရေးဆိုခှငျ့ ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေး ကပွောသညျ။
ဆကျလကျပွီး ကိုဗဈ-၁၉ အတှကျ ထောကျပံ့ရေး ပစ်စညျးပေးသညျ့ ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး စဝျအုမျခေးက “ ဒါက တဈတိုငျး ပွညျလုံး တဈကမ်ဘာလုံးနဲ့ သကျဆိုငျနတေဲ့ ကနျြးမာရေး အန်တရာယျဆိုတော့ ဒါကတော့ ကောငျးမှနျတဲ့ လုပျဆောငျခကျြပ လို့ မွငျပါတယျ”ဟု ထပျလောငျးပွောသညျ။ တဖကျတှငျလညျး အစိုးရတပျမတျော နှငျ့ နယျခွားစောငျ့တပျတို့ ပူးပေါငျးပွီး ဇှနျ ၃ ရကျနကေ့ သြှမျးပွညျအရှပေို့ငျး ပုံပါကငျြမွို့နယျအတှငျးရှိ RCSS/SSA တပျစခနျးကို ပဈခတျခဲ့သေးကွောငျး သိရသညျ။“နယျမွဒေသေရဲ့ နားလညျမှု လှဲနတောကွောငျ့ ထိတှမှေု့တှေ နညျးနညျးပါးပါးဖွဈနတေယျလို့ မွငျပါတယျ။ အကွီးအကယျြ တော့ မဟုတျဘူး” ဟု RCSS/SSA ၏ ပွောခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး စဝျအုမျခေးက ပွောသညျ။ https://burmese.shanne ws.org/archives/17023
လာမယျ့ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံ – ၂၁ရာစုပငျလုံ စတုတ်တအကွိမျ အစညျးအဝေးကငျြးပမယျ့ အခြိနျနဲ့ ပတျသကျ ပွီး ဒီလ ၁၁ရကျနေ့ ရနျကုနျမှာ ကငျြးပတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ EAO တှရေဲ့ကိုယျစား NCA အကောငျအထညျဖျောမှုဆိုငျရာ မူဘောငျညှိနှိုငျးရေးအဖှဲ့ ညှိနှိုငျးရေးမှူး ရဲဘျောမြိုးဝငျးက အခုလိုပွောဆိုခဲ့တာပါ။ “ အစိုးရဘကျက အဆိုပွုထားတာကတော့ ဇူလိုငျလအတှငျးမှာ ကငျြးပခငျြတယျဆိုပွီး အစိုးရဘကျက အဆိုပွုထားတယျ။ အစိုးရဘကျက အဆိုပွုခကျြပျေါမှာ အခွခေံပွီးမှ EAO ပွနျလညျအဆိုပွုဖို့အတှကျကို ကနြျောတို့ ပွငျဆငျထားတာကတော့ ဒီ သွဂုတျလအတှငျးပေါ့။” သွဂုတျလအတှငျးကငျြးပဖို့ကို EAOအဖှဲ့ ကိုယျစားလှယျတှဟော ဒီလ ၁၀ရကျနကေ့ ကငျြးပတဲ့ online အစညျးအဝေးကနေ ဆုံးဖွတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ စတုတ်တအကွိမျ ၂၁ ရာစုပငျလုံအစညျးအဝေးမှာ ပွညျထောငျစု သဘောတူစာခြုပျ အပိုငျး ၃ကို ခြုပျဆိုသှားဖို့အတှကျ ညှိနှိုငျနကွေောငျး ရဲဘျောမြိုးဝငျးက ဆကျပွောပါတယျ။
“ ပွညျထောငျစုသဘောတူစာခြုပျ ခြုပျဆိုနိုငျဖို့အတှကျကို အပိုငျး ၃ပိုငျးနဲ့ ခြုပျဆိုသှားဖို့အတှကျကို ကနြျောတို့ JICM မှာ သဘောတူထားတယျ။ အပိုငျး၁ကတော့ NCA အကောငျအထညျဖျောမှုဆိုငျရာ မူဘောငျသဘောတူညီခကျြ။ အပိုငျး ၂က တော့ ၂၀၂၀ အလှနျမှာ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ ဆကျလကျ အကောငျအထညျဖျောနိုငျဖို့အတှကျ အဆငျ့လိုကျလုပျငနျးစဉျနဲ့ အဆငျ့လိုကျအကောငျအထညျဖျောမှုဆိုတဲ့ အပိုငျး ၂ ကို ခြုပျဆိုနိုငျဖို့ ဆှေးနှေးနတေယျ။ အပိုငျး ၃ကတြော့ အခွခေံမူ သဘောတူညီခကျြပေါ့။ အနာဂတျဒီမိုကရစေီဖကျဒရယျပွညျထောငျစုကို ဘယျလိုအခွခေံမူနဲ့ ပုံဖျောသှားမလဲဆိုတဲ့ လမျးညှနျ မှုမြားကို ခမြှတျနိုငျဖို့အတှကျ ဒီအပိုငျး၃ပိုငျးနဲ့ ခြုပျဆိုသှားနိုငျဖို့ကို အလုပျအဖှဲ့တှေ ညှိနှိုငျးနတောဖွဈပါတယျ။” ပွညျထောငျ စု သဘောတူစာခြုပျ အပိုငျး ၃မှာ ပါဝငျမယျ့ အခကျြ ၃ခကျြကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီလက ကငျြးပတဲ့ JICM ချေါ တဈနိုငျငံ လုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ အကောငျအထညျဖျောမှုဆိုငျရာ ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေးက ဆုံးဖွတျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အရငျ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံမှာ အစိုးရ၊လှတျတျောက ကိုယျစားလှယျ၊တပျမတျော ကိုယျစားလှယျ၊ EAO ကိုယျစားလှယျ၊ နိုငျငံရေးပါတီကိုယျစားလှယျ ၁၅၀ စီ၊ ပါဝငျသငျ့ပါဝငျထိုကျသူနဲ့ တိုငျးရငျးသားကိုယျစားလှယျ ၅၀ စီပါဝငျရာ က လာမယျ့ ညီလာခံမှာတော့ ၃ ပုံ ၁ ပုံအထိ လြော့ခသြှားဖို့ ပွငျဆငျထားတာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ တိုငျးရငျးသား လကျနကျ ကိုငျအဖှဲ့တှရေဲ့ ပွငျဆငျထားတဲ့အခကျြတှကေိုတော့ ဇှနျလ ၂၃ရကျနကေ့နေ ၂၅ရကျနအေ့ထိ အစိုးရကိုယျစားလှယျအဖှဲ့နဲ့ ညှိနှိုငျးသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/covid-10-myanmar-21-century-pinglong-/545924 6.html
ကခငျြပွညျနယျ ပူတာအိုမွို့နယျအတှငျးရှိ လုံးစှတျစဈရှောငျပွညျသူမြား နရေပျပွနျရေးအဆငျမပွတေော့သဖွငျ့ သီးခွား နရောခထြားပေးရနျ ကခငျြလူသားခငျြး စာနာထောကျထားမှုအဖှဲ့ KHCC က စီစဉျနပွေီဟု သိရသညျ။
မွနေရောခပြေးရနျ အစိုးရနှငျ့ညှိနှိုငျးပွီး မွကှေကျတိုငျတာစဈဆေးမှုမြားပွုလုပျနပွေီဟု KHCC ဥက်ကဌ Rev.Dr.Hkalam SamSon က ယခုလို ပွောဆိုသညျ။“ကနြျောတို့ ပူတာအိုစဈရှောငျတှအေတှကျ တရားဝငျခပြေးဖို့ မွတှေဝေယျပွီးမှ လုပျငနျးစနပွေီ။ သူတို့က မူလနရောကို ပွနျဖို့ လုံခွုံရေးအတှကျ စိုးရိမျတော့မွနေရောတှကေို ခပြေးဖို့တောငျးဆိုတာပေါ့။ အဲ့တော့ ကနြျောတို့က အစိုးရနဲ့ ညှိနှိုငျးပွီး လုပျနရေတာပေါ့။ အဲ့ကွောငျ့အခု သူတို့နမေယျ့ နရောကိုလညျး သတျမှတျထား ပွီဖွဈတယျ” ဟု ပွောသညျ။
အဆိုပါ လုံးစှတျစဈရှောငျပွညျသူမြားက နဂိုမူလဒသေသို့ ပွနျလညျနထေိုငျရနျ အခကျအခဲရှိနသေဖွငျ့ မွနေရော အသဈသို့ ရှပွေ့ောငျးအခွခေပြေးရနျ KHCC နှငျ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျထံသို့ အကွောငျးကွားတောငျးဆိုပေးရနျအတှကျ ယခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလဆနျးပိုငျးတှငျ ကခငျြနှဈခွငျးခရဈယာနျအဖှဲ့ခြုပျ KBC သို့ စာပေးပို့ခဲ့သညျ။
လုံးစှတျစဈရှောငျ အိမျထောငျစု ၇၇ ခု၊ လူဦးရေ ၃၀ဝ ကြျောအတှကျ အစိုးရနှငျ့ညှိနှိုငျးပွီး မခမျြးဘော့မွို့နယျအတှငျးရှိ စီဒမျ (Tsi Dam Pa) ကြေးရှာအနီးတှငျ ခပြေးရနျစီစဉျနကွေောငျး သိရသညျ။ KHCC မှ ပွနျလညျထူထောငျရေးအဖွဈစီစဉျပေး မညျ့ မွနေရောသညျ လကျရှိနထေိုငျသညျ့ လုံးစှတျစဈရှောငျစခနျး နှငျ့ ၁၂မိုငျကြျော ဝေးလံနသေောကွောငျ့ စဈရှောငျတခြို့ က စိုးရိမျမှုရှိနကွေောငျး တာဝနျခံ ဦးဖုနျထိက ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ပွောသညျ။“ဖွဈနိုငျရငျတော့ အခုစီစဉျပေးနေ တဲ့ နရောထကျပိုကောငျးတဲ့ နရောမှာရစခေငျြတာပေါ့လေ။ အခုဒီဘကျမှာ က ကိုယျကွိုကျတဲ့ မွနေရောရဖို့က ခဲယဉျးသှားပွီ ဆိုတာတော့ သိတယျ။ ဒါပမေယျ့ စဈရှောငျတှကေ မွို့နဲ့ သိပျမဝေးတဲ့ နရောမှာ ရခငျြတယျ။ အခုက သိပျစိတျကနြေပျမှု မရှိဘူးပေါ့” ဟုပွောသညျ။
လုံးစှတျစဈရှောငျစခနျးတှငျ တိမျးရှောငျနသေညျ့ စဈရှောငျပွညျသူမြားမှာ လှနျခဲ့သညျ့ ၂၀၁၂ ခုနှဈ မခမျြးဘော့မွို့နယျ အငျခါးဂါး၊ အငျဖြီဂါ၊ ဖကနျးနှငျ့ နှငျးတနျဂေါငျး စသညျ့ကြေးရှာမြားတှငျ တိုကျပှဲဖွဈပှားလာသဖွငျ့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျ လာသူမြားဖွဈကွသညျ။ ၎င်းငျးတို့သညျ မူရငျးဒသေသို့ နရေပျပွနျမညျဆိုသျောလညျး အပွနျလမျးမပျေါတှငျ အစိုးရတပျမတျော တပျစခနျးတညျရှိနသေောကွောငျ့ အခကျအခဲ ရှိနသေညျဟု ပွောဆိုနကွေသညျ။ https://burmese.kachinnews.c om/2020/ 06/11/%e1%80%95%e1%80%b0%e1%80%90%e1%80%ac%e1
ရခိုငျပွညျနယျ၊ စဈတှမွေို့နယျ၊ အမွငျ့ကြှနျးကြေးရှာမှာ ဇှနျလ ၁၀ ရကျနကေ့ တပျမတျောရယောဉျမှ လကျနကျကွီး ပဈခတျ မှုကွောငျ့ ကြေးရှာရှိ အဘှားအို ၁ ဦး သဆေုံးပွီး ကြောငျးသူ ၁ ဦးအပါအဝငျ ၄ ဦး ဒဏျရာရရှိသှားတယျလို့ ဒသေခံ တှကေ ပွောပါတယျ။
မနညေ့က တပျမတျောရယောဉျမှကြေးရှာအတှငျးကို လကျနကျကွီးတှနေဲ့ပဈခတျခဲ့တာကွောငျ့ နအေိမျဝရနျတာမှာ အိပျပြျော နတေဲ့ ညီအဈမနှဈဦးထဲက အမအကွီးဖွဈတဲ့ မနန်ဒာဝငျး(၇)တနျး ကြောငျးသူမှာ ဒဏျရာရရှိခဲ့တယျလို့ စဈတှဆေေးရုံမှာ ဆေးကုသ မှုခံယူနရေတယျလို့ မိခငျ ဒျေါအေးအေးကွညျက ပွောပါတယျ။“ည ၁၂ နာရီလောကျမှာပေါ့ ရတေပျကနပွေီး ပဈလို့လာတယျ။ ကမြတို့က ပထမ ရဲစခနျးကနပွေီး ပဈတာလို့ထငျတယျ။ ကမြတို့ အိမျက လမျးထိပျမှာ ဖွဈနတောဆိုတော့ သမီး နှဈယောကျက ဝရနျတာမှာအိပျနတေဲ့အခြိနျမှာ လကျနကျကွီးကတြော့ အစှနျမှာအိပျနတေဲ့ အဈကွီးမကို သှားထိတာ ပေါ့၊ ဒဏျရာကတော့ ခေါငျးရယျ ၊ လညျပငျ့း၏နဲ့ လကျမောငျးတို့ကို ထိသှားတာပေါ့။”လို့ ပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ရှာမှာရှိတဲ့ အသကျ ၈၀ ကြျောအရှယျ အဘှားအိုတဈဦးသဆေုံးသှားပွီး အသကျ ၄၀ ကြျောအရှယျ ၁ ဦးနဲ့ ကြေးရှာနသေူ တခြို့ဒဏျရာရတယျလို့လညျးသိရပါတယျ။ ဇှနျ ၉ ရကျညက စဈတှမွေို့မှ ပုဏ်ဍားကြှနျးမွို့ဘကျသို့ မွငျးဝါ ခြောငျးအတိုငျး ထှကျခှာလာတဲ့ တပျမတျော(ရေ)မှ စဈရယောဉျ ၃ စီးကို အမွငျ့ကြှနျးကြေးရှာအနီးမှာ အအေအေဖှဲ့က လကျနကျကွီး/လကျနကျငယျတှနေဲ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျခဲ့တယျလို့ တပျမတျောက သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။ အအေေ အဖှဲ့အနနေဲ့ တပျမတျောရယောဉျတှေ လာပါက ငါးဖမျးပိုကျတှကေို အရပျသား အယောငျဆောငျပွီး ခထြားလရှေိ့သလို သင်ျဘောကမျးကပျလာတဲ့အခါမှာ အခုလို တိုကျခိုကျမှုမြိုးတှေ လုပျလရှေိ့တယျလို့ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ဒီဗှီဘီကိုပွောထားပါတယျ။ တပျမတျောဘကျက ပွနျလညျပဈခတျတဲ့အခါမှာတော့ အရပျသား သဆေုံးတယျဆိုပွီး အအေဘေကျက ထုတျပွနျပွောဆို လရှေိ့တယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/393638
မှနျပွညျနယျ တဈပွညျနယျလုံးအတိုငျးအတိုငျအတာအနဖွေငျ့ မှတျပုံတငျမရှိသေးသညျ့ ကရငျတိုငျးရငျးသားလူဦးရေ ၅၀,ဝ၀ဝ (ငါးသောငျး)အကြျောအထိ ရှိနနေိုငျသေးကွောငျး မှနျပွညျနယျ၊ ကရငျတိုငျးရငျးသားလူမြိုး ရေးရာဝနျကွီး စောအောငျမွငျ့ခိုငျ က ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
မှနျပွညျနယျတှငျ ကရငျလူမြိုးအမြားစု နထေိုငျသညျ့ ကြေးရှာအုပျစု ၂၇၀ အုပျစုကြျောရှိပွီး ကရြှောအုပျစု အုပျခြုပျရေးမှူး အခြို့၏တငျပွလာသညျ့ မှတျပုံတငျမရှိသူ ဦးရစောရငျးအရ ထိုသို့ ပွောဆိုနိုငျခွငျးဖွဈကွောငျး ကရငျတိုငျးရငျးသား လူမြိုး ရေးရာဝနျကွီး စောအောငျမွငျ့ခိုငျက ပွောသညျ။ ဝနျကွီးက “ကြိုကျမရောမွို့နယျ မိကသဈကြေးရှာအုပျစုတဈခုကို ကောကျ ကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာ အဲဒီကြေးရှာအုပျစုမှာ လူဦးရတေဈထောငျကြျော မှတျပုံတငျပွုလုပျဖို့ ကနျြရှိတဲ့စာရငျးကို ကြေးရှာ အုပျစု အုပျခြုပျရေးမှူးက စာရငျးတငျလာတယျ။ ကြေးရှာအုပျစုတဈခုထဲကိုပဲ တဈထောငျကြျောကနျြတော့ ကြိုကျမရောမွို့ နယျ တဈမွို့နယျလုံးဆိုရငျ အကွမျးအားဖွငျ့က မှတျပုံတငျမရှိတာ ငါးထောငျကြျောရှိနျိုငျတယျ။ ကရငျလူဦးရမြေားတဲ့ သထုံ တို့၊ ဘီးလငျးတို့ဆိုရငျတော့ အဲလောကျ မြားနိုငျတယျ။ ၁၀ မွို့နယျလုံး ခနျ့မှနျးခွအေရဆိုရငျ ငါးသောငျးကြျောမက ရှိနိုငျ တယျလို့ အကွမျးဖငျြးခနျ့မှနျးနိုငျတာပေါ့” ဟု ပွောသညျ။
အဆိုပါ မှတျပုံတငျမရရှိသေးသူမြားမှာ အသကျ ၁၅ နှဈမှစပွီး သကျကွီးရှယျအိုမြားအထိပါဝငျကာ အမြားစုမှာ လမျးပနျး ဆကျသှယျရေးကွောငျ့ ရုံးအထိသှားရောကျမပွုလုပျခငျြသူမြားရှိသလို အခြို့မှာကြေးရှာအုပျစုအတှငျး ကှငျးဆငျး မှတျပုံတငျ ပွုလုပျပေးသညျ့အခြိနျတှငျ အခွအေနမြေိုးမြိုးကွောငျ့ မပွုလုပျဖွဈကွသူမြားလညျး ရှိနသေညျဟု သိရသညျ။“ကနြျောတို့ ကရငျတှအေမြားစု ကနြျောတှတေ့ာက လဝကရုံးကိုသှားဖို့ ခရီးကအရမျးဝေးတယျ။ သှားလုပျတော့ စာရှကျစာတမျးလိုအပျ တော့ နောကျတဈခေါကျပွနျသှား၊ ပွနျလုပျအခေါကျရမြေားတော့ သှားလာစရိတျတှကေ ပိုကုနျလာတယျ။ တခြို့ လဝက ဝနျထမျးက သူတို့တှကေို အပွညျ့အဝမပေးနိုငျတဲ့ ဝနျဆောငျမှုရှိရငျလညျးရှိနိုငျတော့ မသှားလုပျခငျြကွတာ လညျးရှိမယျ။ မှတျပုံတငျမရှိရငျ နိုငျငံသားတဈယောကျရဲ့အခှငျ့အရေး ဆုံးရှုံးမှုတှတေော့ရှိမှာပဲ။ ကိုယျတိုငျမသှား လုပျတတျရငျ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ၊ ပါတီဝငျတှေ၊ အရပျဖကျအဖှဲ့တှအေကူညီတောငျးလို့ရပါတယျ”ဟုဝနျကွီး စောအောငျမွငျ့ခိုငျက ပွောသညျ။
မှနျပွညျနယျတှငျ သထုံ၊ ဘီးလငျး၊ ကြိုကျမရော၊ အပေါငျ၊ ရေး၊ ကြိုကျထို၊ ခြောငျးဆုံ၊ သံဖွူဇရပျ၊ မျောလမွိုငျ နှငျ့ မုဒုံ စ သညျ့ မွို့နယျ ၁၀မွို့နယျရှိကာ မွို့နယျတိုငျးတှငျ ကရငျလူမြိုးမြားနထေိုငျလကျြရှိပွီး အထှထှေေ အုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာန စာ ရငျးအရ ကရငျလူဦးရေ သုံးသိနျးနီးပါးရှိသညျဟု မှနျပွညျနယျ ကရငျတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီး စောအောငျမွငျ့ခိုငျ၏ ပွောပွခကျြမြားအရ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%90%e1%8 0%b9%e1%80%95%e1%
မှတျပုံတငျမရှိသညျ့ ကရငျနီ ဒုက်ခသညျမြားသညျ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ မဲပေးရနျ ဆန်ဒရှိနသေညျဟု ကရငျနီ အမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီ (KNPP) အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးရှမြေိုးသနျ့က ဧရာဝတီသို့ပွောသညျ။ အဆိုပါ ဒုက်ခသညျ မြားသညျ ပွညျတှငျးစဈမြားကွောငျ့ ၁၉၈၇ ခုနှဈကတညျးက ထှကျပွေးလာကွပွီး ထိုငျး-မွနျမာ နယျစပျတလြှောကျတှငျ ဒုက်ခ သညျမြားအဖွဈ မှတျပုံတငျ၊ အိမျထောငျစု ဇယားမြားမရှိဘဲ ကုလသမဂ်ဂ ဒုက်ခသညျမြားဆိုငျရာ မဟာမငျးကွီးရုံး (UNHCR) မှ ထုတျပေးထားသညျ့ ကတျဖွငျ့သာ နထေိုငျကွရသူမြားဖွဈသညျ။ ဦးရှမြေိုးသနျ့က“သူတို့လညျး မဲပေးခှငျ့ ရခငျြတာပေါ့။ ကနြျောထငျတာတော့ သူတို့ မဲပေးခှငျ့ရမှာ မဟုတျဘူး။ သူတို့မှာ မှတျပုံတငျမရှိဘူးလေ။ မဲပေးဖို့ဆို မှတျပုံတငျ ရှိဖို့လိုသလို မဲဆန်ဒရှငျစာရငျးမှာ သူတို့ နာမညျတှေ ပါဖို့လိုတယျ။ ကနြျောတို့ ပွညျနယျအတှကျ ကိုယျစားလှယျကို ကနြျောတို့ကိုယျတိုငျ ရှေးခယျြနိုငျရငျ ပွညျနယျ အစိုးရကို ကိုယျ့ဘာသာ ဖှဲ့လို့ရတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ထိုငျး- မွနျမာနယျစပျတှငျ ဒုက်ခသညျစခနျးပေါငျး ၉ ခု ရှိရာ ကယားပွညျနယျနှငျ့ ထိစပျလကျြနသေညျ့ ထိုငျးနိုငျငံ မယျဟောငျ ဆောငျ ခရိုငျရှိ ကရငျနီ ဒုက်ခသညျစခနျး ၂ ခုလညျး ပါဝငျသညျ။ ထိုကရငျနီ ဒုက်ခသညျစခနျး အမှတျ ၁ နှငျ့ ၂ ရှိတှငျ ဒုက်ခသညျပေါငျး ၁၀၂၈၂ ဦး ရှိသညျ့အနကျ မဲပေးနိုငျသူဦး ရေ ၉ ထောငျ နီးပါးရှိသညျဟု စခနျးတာဝနျခံမြားထံက သိရ သညျ။ ကရငျနီ ဒုက်ခသညျစခနျး အမှတျ ၁ ကို ၁၉၉၅ ခုနှဈက ရောကျရှိလာခဲ့သညျ့ ဒုက်ခသညျ ဦးမီရယျက “ကနြျောတို့ စခနျး ဘကျကို မဲပေးဖို့ လာပွောကွတော့ ကနြျောတို့လညျး မဲပေးခငျြတယျ။ ကနြျောတို့က နိုငျငံမဲ့တှလေို ခံစားနရေတယျ။ ထိုငျးက လညျး နိုငျငံသားအဖွဈ လကျမခံဘူး။ မွနျမာပွညျမှာကလညျး နိုငျငံသား အထောကျအထားဘာမှ မရှိတော့။ တကယျလို့ မဲ ပေးခှငျ့ ရမယျဆိုရငျ ကနြျောတို့က ဒီနိုငျငံသား ဖွဈသှားမှာပေါ့”ဟု ပွော သညျ။
၂၀၁၄ သနျးခေါငျစာရငျးအရ ကယားပွညျနယျတှငျ မညျသညျ့ကတျမှ ကိုငျဆောငျခွငျးမရှိသူ ၁၉၂၃၈ ဦး ရှိရာ ၂၀၁၅ ရှေး ကောကျပှဲတှငျ ထိုမှတျပုံတငျမရှိသူမြား မဲပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသညျဟု ကယားပွညျနယျရှိ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးတခုဖွဈသညျ့ Lain Technical Support Group (LAIN) နညျးပညာ အထောကျ အကူပွုအဖှဲ့၏ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကြျောထငျအောငျက ဆိုသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သကျဆိုငျရာ ဝနျကွီးဌာန အနဖွေငျ့ မညျသညျ့ကတျမှ ကိုငျဆောငျခွငျး မရှိသူမြားကို စီမံခကျြဖွငျ့ မှတျပုံတငျ လုပျ ဆောငျမပေးပါက လာမညျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှငျလညျး မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးနိုငျသူမြား ရှိလာနိုငျသညျဟု ၎င်းငျးက သုံးသပျထားသညျ။
ဒုက်ခသညျစခနျးမှ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ ကလေးသူငယျ အရေးကိစ်စမြား ဆောငျရှကျနသေညျ့ ကရငျနီ အမြိုးသမီး အစညျးအရုံး (KNOW) ဥက်ကဋ်ဌ ဒျေါမီးမီးကလညျး “မှတျပုံတငျ မရှိလို့ ၂၀၁၅ တုနျးက မဲမပေးခဲ့ရတော့ သူတို့က ၂၀၂၀ မှာတော့ မဲပေးခငျြ နကွေတယျ။ အမှနျက ကိုယျ့နိုငျငံထဲက နိုငျငံသားတှပေဲလေ။ ပွညျတှငျးစဈဖွဈလို့သာ ထှကျပွေးလာရတယျ။ သူတို့အိမျတှေ မီးရှို့ခံရနဲ့ သူတို့အသကျစှနျ့ပွေးလာရတဲ့ သူတှပေါ။ အဲဒီတော့ သူတို့ကိုလညျး နိုငျငံသားအနနေဲ့ အသိအမှတျပွုဖို့ လိုသလို မဲပေးပိုငျခှငျ့ပေးဖို့လညျး လိုတယျ” ဟု ဆိုသညျ။
KNPP သညျ ၁၉၉၅ ခုနှဈ မတျလက တပျမတျောနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးယူခဲ့သညျ့ လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးတခုဖွဈပွီး အဆိုပါ ငွိမျးခမျြးရေးသညျ ၃ လ အကွာတှငျ ပကျြပွယျသှားခဲ့သညျ။ တဖနျ၂၀၁၂ ခုနှဈတှငျ KNPP နှငျ့ အစိုးရ ပွညျနယျအဆငျ့ အပဈအခတျရပျစဲရေးလကျမှတျရေးထိုးရာတှငျ ၎င်းငျးတို့၏ တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ မိသားစုမြားအပါအဝငျ ဒုက်ခသညျမြားကိုလညျး မှတျပုံတငျရရှိရေး ဆောငျရှကျပေးရနျ ကိစ်စရပျမြားထညျ့သှငျး တောငျးဆိုခဲ့ဖူးကွောငျး သိရသညျ။ https://burma.irrawad dy.com/news/2020/06/12/224485.html
ပွိုကခြဲ့သညျ့ နှဈပေါငျးရာခြီရှိသညျ့ ပငျလောငျးဟျောနနျးကို ပွနျလညျထိနျးသိမျးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ မေ ၁၉ ရကျတှငျ ပွိုကခြဲ့သညျ့ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ပငျလောငျးမွို့၏ နှဈပေါငျးရာခြီ အမှအေနှဈဟျောနနျးကို ပွနျလညျ ထိနျးသိမျး ရနျအတှကျ ဇှနျ ၂ ရကျနကျ ၆ နာရီမှာ သြှမျးရိုးရာ ထုံးတမျးအစဉျအလာဖွငျ့ ခှငျ့တောငျးပှဲကို မှတေျောပရိယတ်တိ စာသငျတိုကျ ဆရာတျောက လာရောကျခြီးမွှငျ့ ပေးခဲ့သညျ။
“ဟျောနနျး ပွနျလညျထိနျးသိမျးတဲ့ သဘောပဲပေါ့။ သူ့ရဲ့အုတျရိုးတှေ အုတျခုံတှေ မပကျြစီးသှားအောငျ ပွိုနတေဲ့အရာကို လညျး ပွိုတဲ့အတိုငျးပဲ ထားထားမှာပါ” ဟျောနနျးကို ပွနျလညျပွုပွငျဖို့အတှကျ တကျကွှလှုပျရှားသူဖွဈသညျ့ စိုငျးခှနျမိနျးခမျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ လကျရှိ မပကျြစီးသေးသညျ့ အုတျရိုး၊ အုတျခုံမြားကို ထိနျးသိမျးသှားမညျဖွဈပွီး၊ မွို့ဟောငျးမြား ထိနျးသိမျးသကဲ့သို ဆကျလကျထိနျးသိမျးသှားမညျ ဟု စိုငျးခှနျမိနျးခမျး ကပွောပွသညျ။“ရနျပုံငှေ ရှိပွီးတော့ ထလုပျတာမြိုးမဟုတျဘူး။ ခနျ့မှနျးခွေ သိနျး ၅၀ လောကျကုနျမယျ။ ရှာလိုကျ လုပျလိုကျတဲ့နဲ့ပဲ ငှရေေး ကွေးရေးတော့ အခကျခဲ ရှိတယျ” ဟု စိုငျးခှနျမိနျးခမျး က ဆိုသညျ။
ပငျလောငျးမွို့သညျ ပွညျတှငျးပွညျပ ခရီးသှားဧညျ့သညျမြား လာရောကျလညျ့ပတျမှု မြားပွားသညျ့အတှကျ ဟျောနနျး၏ သမိုငျးအထောအထားမြား ပွသပွီး ဟျောနနျးကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးသှားမညျ ဖွဈသညျ။ ပငျလောငျး ဟျောနနျးပွနျလညျ ထိနျးသိမျးရနျအတှကျ ဟျောနနျး မိသားစုဝငျမြား၊ သြှမျးလူငယျမြား ၊ သြှမျးသံယာတျောမြား ပူးပေါငျးပွီး ထိနျးသိမျးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17047
ရခိုငျပွညျနယျ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့ပျေါ အေးစတေီဘုရား အနီးတှငျ ယနမေ့နကျ ၇ နာရီခနျ့က ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) အဖှဲ့ဝငျမြား က တပျမတျော အရာရှိ ၁ ဦးကို ဓားဖွငျ့ထိုးသတျဖွတျခဲ့ပွီး တပျဖှဲ့ဝငျ ၁ ဦးကို ဖမျးဆီးသှားကွောငျး တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးက အတညျပွုသညျ။ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျး က “ပုဏ်ဏားကြှနျးမှာ ဒီမနကျအဲဒီမှာရှိတဲ့ တပျရငျးတရငျးက စဈ သညျတခြို့ ဈေးဝယျသှားတာ၊ အရပျဝတျနဲ့ ဈေးဝယျသှားတာဖွဈတယျ။ တယောကျကတော့ အရာရှိနဲ့စဈသညျ တယောကျ ပေါ့။ ပွောရရငျတော့ AA ပါပဲ။ AA အဖှဲ့ဝငျတှကေ ဝိုငျးဝနျးခြုပျနှောငျပွီးတော့ ပထမဆုံးရိုကျနှကျတယျ။ ပွီးရငျ လကျထိပျခတျ တယျ။ လကျထိပျခတျပွီး ဓားနဲ့ထိုးသှားတယျ။ အရာရှိကတော့ ဆုံးသှားပွီလို့ သိရတယျ။ ရဲကတော့ စဈဆေးတာတှေ ဆောငျရှကျနတေယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
AA ကို အကွမျးဖကျအဖှဲ့အဖွဈ ထုတျပွနျကွညောထားသဖွငျ့ ထိုဖွဈစဉျမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျခွငျးမရှိပါ။ ပုဏ်ဏားကြှနျးမဲဆန်ဒနယျမှ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးအောငျသနျးတငျက“ဒီနမေ့နကျပိုငျးမှာ အေးစတေီဘုရားအ နီးမှာအရာရှိ ၁ ဦးကို ဓားနဲ့ထိုးပွီးတော့ ၁ ဦးကိုဖမျးချေါသှားတယျလို့ကွားတယျ။ မွို့ခံတှကေလညျး အိမျထဲကမထှကျရဲကွ တဲ့အတှကျ အသေးစိတျကိုတော့ မသိဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ ထိုသို့ ဖွဈစဉျဖွဈပှားမှုကွောငျ့ တပျမတျောသားမြား နှငျ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားမှာ ဖမျးဆီးခေါငျးဆောငျသှားသူမြားနောကျသို့ လိုကျလံကာ ရှာဖှနေကွေောငျးလညျးသိရသညျ။
အခငျးဖွဈပှားပွီးနောကျ မွို့ပျေါ၌ သနေတျပဈခတျသံမြားကို ကွားနပွေီး ဈေးဆိုငျတနျးမြား၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ရောငျးခြ သော ပြံကဈြေးသညျမြားမှာလညျး ကွောကျလနျ့ကွကာ ဆိုငျအားလုံး ပိတျထားရကွောငျးလညျး ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/11/224447.html
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့လယျ ခရိုငျရဲတပျဖှဲ့ရုံးရှေ့ အုတျတံတိုငျးအနီး ရပျထားသော သုံးဘီးဆိုငျကယျ အောကျတှငျ ယမနျနေ့ ဇှနျလ ၉ ရကျနေ့ ည ၈း၅၀ အခြိနျခနျ့ က ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ပေါကျကှဲမှုမှာ ဗုံးသီးဟောငျးအား ဒီတိုနီတာ တပျဆငျ၍ ခြိနျကိုကျမိုငျးပုံစံအ သုံးပွု၍ ဖောကျခှဲခဲ့သညျဟု တာဝနျရှိသူမြားက သုံးသပျပွောဆိုသညျ။
အဆိုပါ ဗုံးပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ ကတ်တရာလမျး (၆)လကျမပတျလညျ၊ အနကျ ဝ.၅ လကျမ ခနျ့၊ သုံးဘီးဆိုငျကယျ နောကျတှဲ ကွမျးခငျး၌ ဗုံးစထိမှနျ၍ အပေါကျ ၅ ပေါကျခနျ့၊ ဆိုငျကယျယာဉျ မောငျးထိုငျခုံအောကျရှိ ဆီတိုငျကီနှငျ့ဝါယာထုပျမြား လှငျ့စငျ သှားခဲ့သညျ။ ထို့အပွငျ ဆနျ့ကငျြဘကျယာဉျကြောအတိုငျး မွဝတီမွို့ပွငျဘကျမှမွို့တှငျးသို့ မောငျးနှငျလာ သညျ့ဝျေါလမွေို့၊ ထီးသဲလယျကြောငျးထိုငျဆရာတျော ဥူးဝါယမ၊ သကျတျော ၄၇ နှဈ၊ ဝါတျော ၂၇ ဝါနှငျ့ ယာဉျမောငျး ဥူးပညာဝံသ၊ သကျ တျော ၄၄ နှဈ မောငျးနှငျသညျ့ Surf (အပွာရောငျ)ယာဉျအား ဝဲဘကျခွမျးရှတေံ့ခါးဗုံးစလှငျ့စငျ၍ (၂)ခကျြထိမှနျခဲ့ပွီး အဆိုပါ ဗုံးသီးစသညျ တံခါးအားဖောကျဝငျကာ ယာဉျမောငျးဖွဈသူ ဥူးပညာဝံသ၏ ဝဲဘကျခွသေလုံး ပှနျးပဲ့ဒဏျရာ (မစိုးရိမျရ)ရရှိခဲ့ ကွောငျး သိရှိရသညျ။
၎င်းငျးဗုံးပေါကျကှဲရာနရောသို့ မွဝတီရှတေ့နျးရုံး တပျမတျောခွလေငျြတပျရငျး(၉၇)မှ တပျမတျောတာဝနျရှိသူမြား၊ ခရိုငျရဲတပျ ဖှဲ့ ၊ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့ နှငျ့ တာဝနိရှိသူမြားမှ ဖွဈစဉျကို စဈဆေး မှုမြား ပွုလုပျခဲ့ပွီး ထိုသို့ ဗုံးဖောကျခှဲခဲ့သူအား မွဝတီမွို့မရဲ စခနျးက (ပ)၄၁၃/၂၀၂၀၊ ပေါကျကှဲ-၃ ဖွငျ့ အမှုရေးဖှငျ့ထားပွီး တရားခံအား ဖမျးဆီးရမိနိုငျခွငျးမရှိသေးပေ။ ထိုသို့ ဗုံးပေါကျ ကှဲမှု ဖွဈပှားခဲ့သညျ့နရောတှငျ မွဝတီမွို့ဘုရငျ့နောငျလမျးမကွီးဘေး ခရိုငျရဲ တပျဖှဲ့ရုံးရှေ့ အုတျတံတိုငျးနှငျ့ ၁၀ ပခေနျ့ အကှာတှငျဖွဈပွီး အနီးဝနျးကငျြတှငျ တပျမတျောရှတေ့နျးရုံး၊ အကောကျခှနျရုံးနှငျ့ ယာဉျထိနျးရုံးတို့ရှိသညျ့အတှကျ ဖောကျခှဲ သူ၏ ရညျ ရှယျခကျြအပျေါ မွို့ခံပွညျသူမြားမှ ထငျကွေးအမြိုးမြိုးပေး၍ ဝဖေနျမှုမွငျ့တကျ လကျြရှိသညျ။
၎င်းငျးအပွငျ ဇှနျလ ၈ ရကျနေ့ ည ၈း၁၅ အခြိနျခနျ့ကလညျး မွဝတီမွို့နှငျ့နယျနိမိတျ ထိစပျ နသေညျ့ ကော့ကရိတျမွို့မရဲစခနျး အရှတှေ့ငျ အလားတူ ဗုံးပေါကျကှဲမှုဖွဈခဲ့၍ အကွောငျး အရာနှဈခု ဆကျစပျမှု ရှိနိုငျသညျဟု သုံးသပျပွောဆိုမှုမြားလညျး ရှိနသေညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80% ae%e1%8
ရှမျးပွညျနယျ လားရှိုးဘကျမှ ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့သို့ တက်ကစီယာဉျ ၂ စီးအား စငျးလုံးငှါးလာသညျ့ အထောကျအထားမဲ့ တရုတျနိုငျငံသား ၈ ဦးကို (ဇှနျလ ၁၁ ရကျ) ၁၀း၃၀ အခြိနျခနျ့က မွဝတီမွို့ အမှတျ( ၄) ရပျကှကျ အာရှလမျး မွနေီကုနျး လမျးဆုံနရောတှငျ ယာဉျကွောစဈဆေးရေး ဆောငျရှကျနသေညျ့ နယျမွေ တပျမတျောနှငျ့ ရဲတပျဖှဲ့က ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
နံနကျ ၁၀း၃၀ အခြိနျတှငျ မွဝတီမွို့၊ အမှတျ(၄)ရပျကှကျ၊ အာရှလမျး၊ မွနေီကုနျးလမျးဆုံတှငျ မွဝတီရှတေ့နျရုံး ခွလေငျြတပျ ရငျး (၉၇)မှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ မွဝတီမွို့မရဲစခနျးမှ တာဝနျရှိသူမြားပါဝငျသညျ့ ပူးပေါငျး အဖှဲ့သညျ လမျးပျေါတှငျ ဖွတျသနျး သှားလာလကျြရှိသော မျောတျောယာဉျမြားအား လကျနကျ/ခဲယမျးမြား သယျဆောငျမှုရှိ/မရှိ ရပျတနျ့ရှာဖှစေဈဆေးနစေဉျ သင်ျဃနျးညီနောငျဘကျမှ မွဝတီမွို့တှငျးဘကျသို့ မောငျးနှငျလာသညျ့ တက်ကစီယာဉျ ၂ စီးအားစဈဆေးမှုပွုလုပျခဲ့သညျ။ ထိုသို့ စဈဆေးခဲ့ရာ ၎င်းငျးယာဉျ(၂)စီးပျေါတှငျ ပတျဈပို့ စာအုပျသာပါရှိကာ ပွညျဝငျခှငျ့ဗီဇာမပါရှိသူ ကြား (၅)ဦးနှငျ့ မ(၁)ဦး နှငျ့ မညျ သညျ့ အထောကျအထားမြှ မပါသောကြား(၂)ဦး စုစုပေါငျး တရုတျနိုငျငံသား ၈ ဦးအား ဖမျးဆီးရမိပွီး မွဝတီခရိုငျ လူဝငျမှု ကွီးကွပျရေးရုံးသို့ ပို့ဆောငျခဲ့သညျ။
အဆိုပါ တရုတျနိုငျငံသား ၈ ဦးသညျ ရှမျးပွညျနယျ လားရှိုးမွို့မှ ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့သို့ မျောတျောယာဉျခ (၅)သိနျး ကပျြဖွငျ့ တငျဆောငျလာခွငျးဖွဈကွောငျးနှငျ့ ၎င်းငျးတို့တှငျ ပတျဈပို့စာအုပျမြားပါရှိပွီး အထောကျအထား ပွညျစုံမှုရှိမရှိကို မိမိတို့အနဖွေငျ့မသိ၍ သာမနျခရီးသှားပုံစံဖွငျ့ တငျဆောငျလာခွငျးသာဖွဈကွောငျး ယာဉျမောငျး ၂ ဦးက ပွောဆိုခဲ့သညျ။ အထောကျအထားမဲ့ တရုတျနိုငျငံသား ၈ ဦးနှငျ့ ၎င်းငျးတို့အား တငျဆောငျလာသူ ယာဉျမောငျး၂ ဦးကို မွဝတီခရိုငျ လူဝငျမှု ကွီးကွပျရေးအဖှဲ့မှ စဈဆေးပွီးနောကျ တညျဆဲဥပဒအေရ အရေးယူဆောငျရှကျနိုငျရနျ စီစဉျသှားမညျဟု သိရသညျ။ http:/ /kicnews.org/2020/06/%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%82%90%e1%82%88%e1%80
အီးမေးလျရခိုငျပွညျနယျ မငျးပွားမွို့နယျ ကြောကျခုတျနဲ့ သဈပုတျတောငျ ကြေးရှာကွားမှာ ဇှနျလ ၁၀ ရကျ မနကျ အစော ပိုငျးက ပေါကျကှဲမှုတခုဖွဈပွီးနောကျ ပဈခတျတိုကျခိုကျသံတှေ ကွားရတာကွောငျ့ ဒသေခံ ၆ ထောငျနီးပါးဟာ နီးစပျရာ ကြေးရှာတှကေို ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေပါတယျ။
ကြောကျခုတျ ကြေးရှာကနေ တပျမတျော စဈကွောငျးထှကျသှားပွီး မိုငျဝကျလောကျ အရောကျမှာ ပေါကျကှဲသံကွားရပွီး ပဈခတျသံတှေ ကွားရတာကွောငျ့ ရှာသားတှဟော တပျမတျောက ဖမျးဆီးမှာကို စိုးရိမျပွီး နီးစပျရာကြေးရှာတှကေို ထှကျပွေးနတေယျလို့ အမညျမဖျောလိုတဲ့ ကြောကျခုတျရှာသားတဈဦးက ပွောပါတယျ။
ပေါကျကှဲမှုဖွဈပွီးနောကျ တပျမတျောစဈကွောငျးက သဈပုတျတောငျကြေးရှာထဲကို ဝငျလာတာကွောငျ့ တဈရှာလုံး ကွောကျ လနျ့ ထှကျပွေးနကွေတယျလို့ အမညျမဖျောလို့တဲ့ ဒသေခံတဈဦးက ပွောပါတယျ။ သဈပုတျတောငျမှာ ရှာသား ၆ ဦးကို တပျမတျောက ဘုနျကွီးကြောငျးမှာ ဖမျးဆီးထားပွီး ထှကျပွေးသှားတဲ့ ရှာသားတှကေို ပွနျချေါပေးဖို့၊ ပွနျမချေါပေးရငျ ရှာကိုမီးရှို့မယျဆိုတာမြိုး ရပျမိရပျဖတှကေို ခွိမျးခွောကျနတေယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ မနတေု့နျးက လှတှေနေဲ့ ထှကျပွေးရာမှာ တပျမတျောက သနေတျနဲ့ လိုကျလံပဈခတျတာတှေ ရှိတာကွောငျ့ ရှာကိုမပွနျရဲဘူးလို့ အမညျမဖျောလို့တဲ့ ရှာသားတဈဦးက ပွောပါတယျ။ ကြောကျခုတျကြေးရှာမှာ ဇှနျလ၉ရကျနတေု့နျးက တပျမတျော စဈကွောငျးဝငျလာပွီး အရပျ သား ၇ ဦးကို ဖမျးဆီးစဈဆေးတာတှလေုပျခဲ့တယျ။ မနကေ့ ဇှနျလ ၁၀ ရကျ မနကျပိုငျးကမှ သူတို့ကို ပွနျလှတျပေးလိုကျတာ လို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။
ကြောကျခုတျကြေးရှာဟာ အိမျခွေ ၆၀ဝ နီးပါးရှိပွီး လူဦးရေ သုံးထောငျကြျောရှိသလို သဈပုတျတောငျ ကြေးရှာမှာလညျး အိမျခွေ ၄၀ဝ ကြျောရှိပွီး လူဦးရေ သုံးထောငျ ဝနျးကငျြရှိတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ မငျးပွားပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးလှသိနျးအောငျကို RFA ကဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့တဲ့အခါ ဇှနျလ ၉ ရကျနကေ့ ကြောကျခုတျ ရှာမှာ ဒသေခံ ၇ ဦး ဖမျးဆီးခံရတယျဆိုကွားရကွောငျး မနကေ့ မနကျမှာလညျး ပေါကျကှဲမှု တဈခုဖွဈတယျဆိုတာ သတငျး ကွားရကွောငျး ပွောပါတယျ။
တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးကတော့ သဈပုတျတောငျကြေးရှာ နဲ့ ပတျသကျတဲ့ သတငျးကို အသေးစိတျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယျ။ တပျမတျောကို မိုငျးခှဲတိုကျခိုကျပွီး ရှာထဲဝငျပွေးသှား တာတှရှေိရငျတော့ တပျမတျောက စဈဆေးတာတှေ ရှိနိုငျကွောငျး ဒါပမေယျ့ တပျမတျောက ရှာကိုမီးရှို့မယျလို့ ခွိမျးခွောကျ ပွောဆိုတယျဆိုတာက ရှာသားအမညျခံပွီး AA အမာခံတှကေ စှပျစှဲပွောဆိုတာတှဖွေဈနိုငျတယျလို့ RFA ကိုပွောပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/minbya-rakhine-villagers-06102020195217.html
လူနာအမှတျစဉျ ၂၄၉ နှငျ့ထိတှခေဲ့သညျ့ မွဈကွီးနားတက်ကသိုလျတှငျ စာစဈရနျရောကျရှိနသေညျ့ ဆရာနှငျ့တဈဆောငျတညျး အတူနသေညျ့ဆရာ ၅၆ ဦးကိုလညျး အသှားအလာကနျ့သတျမှု ပွုလုပျထားကွောငျး မွဈကွီးနားတက်ကသိုလျပါမောက်ခခြုပျ ဒေါကျတာ အောငျဝငျးထံမှ သိရသညျ။“ခုလောလောဆယျတော့ အဲဆရာ ၅၆ ဦး ကိုအသှားလာ ကနျ့သတျထားတယျ။ ထမငျးကြှေးတဲ့အစီစဉျတှေ ကြောငျးကဘဲဆောငျရှကျပေးထားတယျ။ အစောငျ့အရှောကျတှနေဲ့ထားတဲ့ Quarantine မဟုတျ ဘူး။ လတျတဈပကျြဖွဈသှားတဲ့ အပူခြိနျ တိုငျးပေးဖို့တှကျကတြော့ စာစဈတဲ့ခြိနျမှာကနျြးမာရေးစောကျရှောကျပေးတဲ့ ဆရာမ ၂ ဦးရှိတယျ။ အဲဆရာမ ၂ ဦးကနပွေီး မနကျတိုငျးသှားပွီး အပူခြိနျတိုငျးပေးမှာဖွဈတယျ။
ကနျြးမာရေးဌာနကလညျး ဆရာမ တဈဦးလာမယျ။”ဟု မွဈကွီးနား တက်ကသိုလျပါမက်ေခခြုပျ ဒေါကျတာအောငျဝငျးက ဆို သညျ။ မွဈကွီးနားတက်ကသိုလျတှငျ စာစဈရနျတှကျ ဇှနျလ ၃ ရကျနမှေ့စကာ ဆရာ၊ဆရာမစုစုပေါငျး ၁၄၅၂ ဦးရှိကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ ပိုးတှလေူ့နာအမှတျ ၂၄၉ သညျ မိုးမောကျမွို့ မုနျးခမျးကြေးလကျကနျြးမာရေးဌာနခှဲမှ သားဖှား ဆရာမ တဈဦးဖွဈပွီး ၎င်းငျး၏ ခရီးသှားရာဇဝငျအရ မလေ ၂၈ ရကျမှ ၃၁ ရကျနထေိ့ အဆိုပါကြောငျးဆရာ၏ နအေိမျတှငျ တညျးခိုခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရ သညျ။
“Case-249 ရဲ့နှာခေါငျးတို့ဖတျ၊ အာခေါငျတို့ဖတျကို ဇှနျလ ၄ ရကျနကေ့ ပို့ခဲ့တာဖွဈတယျ။ ဆေးစဈခကျြအဖွကေတော့ ဇှနျလ ၁၁ ရကျနမှေ့ာထှကျတယျ။ သိသိခငျြးဘဲ Contant တှယေူပွီး မွဈကွီးနားမှာစာစဈဖို့ရောကျရှိ နတေဲ့ဆရာဖွဈနတေဲ့ တှကျမနကေ့စပွီး ဆေးရုံပို့ထားပွီးဖွဈတယျ။”ဟု ကခငျြပွညျနယျ Covid-19 ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေး ကျောမတီမှ ဒုညှနျကွားရေးမှူး ဦးတငျ့နိုငျ ကပွောသညျ။ ဗနျးမျောမှ မွဈကွီးနားတက်ကသိုလျတှငျရောကျရှိလာသညျ့ စာစဈ ဆရာ၏ ခရီးသှားရာဇဝငျသညျ ဇှနျ ၂ ရကျနတှေ့ငျ ရှကေူ မိုးစိပျရှာသို့သှားခဲ့ပွီး ၃ရကျနတှေ့ငျ ရှကေူမှမွဈကွီးနားသို့ တိုကျရိုကျပွနျလာခွငျးဖွဈပွီး၊ မွဈကွီးနားဂြိနျးဖေါ့ဧရာကားဖွငျ့ ရောကျရှိလာခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ၎င်းငျးနဲ့တူ ကြောငျး ဆရာ ၂ ဦးအပါအဝငျ တပျမတျောသားတဈဦးလညျးပါဝငျကာ လကျရှိခြိနျတှငျယငျးကြောငျးဆရာ ၂ ဦးအပါအဝငျ တပျမတျောသားတဈဦး စုစုပေါငျး ၃ ဦးကို F.Q ထားရှိထားပွီဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။
ပိုးတှလေူ့နာနှငျ့ထိတှမှေု့ရှိခဲ့သညျ့ ကြောငျးဆရာနှငျ့ပတျသကျပွီး သကျဆိုငျရာကနျြးမာရေးဌာသို့ လူကိုယျတိုငျဖွဈစေ ဖုနျး ဖွငျ့ဖွဈစေ ဆကျသှယျမေးမွနျးသျောလညျး ပွနျလညျဖွကွေားခွငျးမရှိခဲ့ပေ။ ပိုးတှလေူ့နာအမှတျစဉျ ၂၄၉ သညျ မိုးမောကျ ဆေးရုံ၊ စာစဈဆရာ၏ နအေိမျ၊ ဇာဘျောလီဆိုငျ၊ လှယျဂယျြစဈဆေးရေးဂိတျ၊ ကာကှယျဆေးထိုးသညျ့နရောမြား၊ သူနာပွုနဲ့ ပတျသကျ သောနအေိမျမြားအပွငျ နရောစုစုပေါငျး ၁၆ ခုတှငျ ရောကျရှိခဲ့သညျဟု ဦးတငျ့နိုငျထံမှ သိရသညျ။ ကခငျြပွညျနယျ တှငျ လှယျဂယျြဂိတျမှပွနျလညျဝငျရောကျလာသူ ဇှနျလ ၁၂ ရကျနထေိ့ ၁ သောငျးကြျောရှိပွီဖွဈသညျ။ https://burmes e.kachinnews.com/2020/06/12/%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး တနျ့ယနျးမွို့နယျ နမျ့လပျကြေးရှာအုပျစု နမျ့ပတျကြေးရှာ ဒသေခံ လငျမယား ၂ ဦး အဆိပျသငျ့မှို စားသုံးကာ သဆေုံးမှုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
အဆိုပါ သဆေုံးသှားသညျ့ လငျမယား ၂ ဦးသညျ ဇှနျ ၆ ရကျ တှငျတောငျယာသို့သှားအလုပျလုပျရငျး မှိုမြားရလာခဲ့ရာ အဆိုပါမှိုမြားကိုစားသုံးကွပွီးနောကျ သဆေုံးသှားကွကွောငျး နမျ့ပတျကြေးရှာ ဒသေခံ စိုငျးစှမျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ ထို အဆိပျရှိသညျ့ မှိုကို စားသုံးပွီးနောကျ လငျယောကျကြားဖွဈသူသညျ ဇှနျ ၈ ရကျ မနကျပိုငျးတှငျ သဆေုံးခဲ့ ပွီး၊ ဇနီးဖွဈသူသညျ ဇှနျ ၉ ရကျ ည ၈ နာရီဝနျးကငျြတှငျ သဆေုံးခဲ့ကွောငျး စိုငျးစှမျ က ပွောသညျ။ “ အဆိပျရှိ တဲ့မှိုစားပွီး သတေယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ လငျမယား ၂ ယောကျလုံးက ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ပဲ။ ဒီကသူတှကေ မှိုဆိုတာ အဆိပျရှိမရှိ မသိဘူး။ စားကွတာပဲ” ဟု စိုငျးစှမျ က ဆိုသညျ။
တနျ့ယနျးမွို့နယျအတှငျး နထေိုငျသူမြားစုသညျ တောငျယာသှားကာ တောထဲတှငျ ဟငျးရှကျမြား ရှာဖှပွေီးစားသုံးလရှေိ့ ကွကွောငျး၊ ယခု ရာသီတှငျ မှိုမြားစှာပေါကျသဖွငျ့ မှိုမြားတှငျ အဆိပျရှိသညျ့မှို၊ အဆိပျမရှိသညျ့ မှိုကို မသိရှိဘဲ ခူးလာကာ ခကျြစားကွလရှေိ့သညျ ဟု စိုငျးစှမျ က ပွောပွသညျ။ “ သဆေုံးသူ တှမှော တော့ကလေးကနျြခဲ့တယျ။ ကလေးကတော့ ဘာမှ မဖွဈဘူး”ဟုလညျး စိုငျးစှမျ က ထပျလောငျးပွောသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ယခုရာသီတှငျ ဒသေခံ တောငျသူမြားကို တောထဲတှငျ တှသေ့မြှမှိုမြား မခူးစားရနျ ပညာပေးသငျ့ကွောငျး၊ မှိုစားသုံးပါက အဆိပျရှိ၊ မရှိ သိရှိရနျ လိုအပျကွောငျးလညျး တနျ့ယနျး ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။
“ ကြေးရှာမှာနထေိုငျတဲ့သူအမြားစုက အခွခေံ လူတနျးစားတှမြေားတယျ။ သူတို့တှကေ မှိုမွငျတာနဲ့ စားလို့ရတဲ့ မှိုပဲထငျကွ တယျ။ မစားခငျမှာ မှိုဆိပျရှိ၊မရှိ သိအောငျလုပျသငျ့တယျ”ဟု တနျ့ယနျးဒသေခံ တဦးဖွဈသညျ့ စိုငျးယီ က ပွောသညျ။ အဆိပျရှိသညျဟု ယူဆရသညျ့ မှိုမြားမှာ- ဆှတျဆှတျဖွူသညျ့မှိုမြား၊ အညိုရောငျမှိုသေးသေးမှားမှားမြား၊ အညိုရောငျ မှိုပှငျ့ကွီးမြား၊ အနီရောငျ၊ ပနျးရောငျ အဆငျးရှိသညျ့ မှိုမြား၊ မှိုပှငျ့ကို လကျနှငျ့ ခွှပတျေသညျ့ အခါ အနီရောငျ အရညျထှကျ ခွငျးတို့ဖွဈသညျ။ အဆိပျရှိသညျ့ မှိုမြားကို စားသုံးမိပါက ခံစားရသညျ့ ရောဂါလက်ခဏာမြားမှာ မူးဝခွေငျး၊ အော့အနျခွငျး၊ သှေးပေါငျခြိနျ ကခြွငျး၊ ဗိုကျအောငျ့ခွငျး၊ ဝမျးလြှောခွငျး၊ အသကျရှူရခကျခဲခွငျး၊ သတိလဈမမြေ့ောခွငျးနှငျ့ တကျခွငျး မြားဖွဈပှားနိုငျသညျ။ မှိုဆိပျသငျ့ခွငျးကွောငျ့ သာမာနျရောဂါ လက်ခဏာမြားမှ အသကျသဆေုံးသညျ့ အထိဖွဈပှားနိုငျကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17062